XyBo: 7/1/08 - 8/1/08
ဒီကနေ့တော့ ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ အထင်ရှားဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ ဂျယ်ဂျူဒို အကြောင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ "ဂျယ်ဂျူ" ဆိုတာကတော့ ဒီတိုင်း နာမည် သက်သက် ဖြစ်ပြီး "ဒို" ဆိုတာကတော့ ကျွန်းလို့ဆိုလိုပါတယ်။ ဂျယ်ဂျူဒိုဟာလှပပြီး ရာသီဥတု ကောင်းတဲ့ ကျွန်းလေးတစ်ကျွန်းပါ။ ဒါပေမယ့် စရိတ်အလွန်ကြီးတာကြောင့် ကိုရီးယားလူမျိုးများပင် သွားရန်ခက်ခဲလှပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဂျယ်ဂျူဒိုကိုတော့ တစ်သက်မှာ တစ်ခါတော့ သေချာပေါက်ရောက်ချင်ကြပါတယ်။ ကိုရီးယားကို အလည်ရောက်တဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေဆိုရင်လည်း ဂျယ်ဂျူကျွန်းကို အလည်ရောက်မှ ကိုရီးယားကို ရောက်ခဲ့တယ်လို့ ပြောလို့ ရလောက်အောင်ကို ထင်ရှားတဲ့ ကျွန်းလေးတစ်ကျွန်းပါ။ ကျွန်မတို့ဆီက ပုဂံလိုပေါ့။ ဒီကျွန်းလေးမှာ အရမ်းကိုများတဲ့ အရာ ၃ခု ရှိပါတယ်။ ဒါကတော့
၃။ ကျောက်တုံး တွေဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဂျယ်ဂျူဒိုဟာ လေးဘက်လေးတန်မှာ ပင်လယ်ကြီး ဝန်းရံထားတဲ့ ကျွန်းလေးတစ်ကျွန်းမို့ လေအလွန်တိုက်ပါတယ်။ ဒါ့ပြင် ဂျယ်ဂျူဒိုမှာ ရှိတဲ့ ယောင်္ကျားများက နေ့အချိန်မှာတော့ ငါးဖမ်းထွက်ရတာမို့ နေ့ခင်းအချိန်မှာ မိန်းမများကိုသာ တွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါ့ပြင် ကျောက်တုန်း၊ ကျောက်ဆောင်တွေ များလွန်းတာကြောင့် အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းကို ကျောက်တုန်းတွေနဲ့ ခြံစည်းရိုးခတ်ရလောက်အောင်ပါဘဲ။ ကိုရီးယားတစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ရှိတဲ့ လိမ္မော်သီးတွေဟာလည်း ဂျယ်ဂျူကျွန်းထွက် ပစ္စည်းများ ဖြစ်ပါတယ်။ ရာသီဥတုကောင်းမွန်တာကြောင့် စိုက်ပျိုးရေးဖြစ်ထွန်းတဲ့ ကျွန်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ဘက်မှာတော့ ဂျယ်ဂျူကျွန်းရဲ့ ထင်ရှားလှပတဲ့ ရှုခင်းများနဲ့ အစားအသောက်များကို ပုံနှင့်တကွ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒါကတော့ ဂျယ်ဂျူကျွန်းရဲ့ နေ၀င်ချိန်ရှုခင်းပါ။
ဒါကတော့ ဂျယ်ဂျူကျွန်းမှာ ရှိတဲ့ မီးပြတိုက်ပါ။
ဒါကတော့ ဂျယ်ဂျူကျွန်းရဲ့ ကျောက်ဆောင်ကြီးတွေပေါ့။
ဒါကတော့ ကျောက်တုံးအိမ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်
ဒါကတော့ ဂျယ်ဂျူကျွန်းရဲ့ အလှအပ တစ်ခုပါ။
ဒါကတော့ ဂျယ်ဂျူကျွန်းမှာ နာမည်ကြီးတဲ့ ငါးဟင်းပါ။
ဒါကတော့ ဂျယ်ဂျူကျွန်းမှာဘဲ ရနိုင်တဲ့ ရေညှိဟင်းချိုပါ။ ဒီဟင်းကို တစ်ခြားမြို့များမှာတော့ အမဲသား၊ ငါးခြောက်များနဲ့ ချက်လေ့ချက်ထ ရှိပေမယ့် ဂျယ်ဂျူကျွန်းမှာတော့ ဂဏန်းသားနဲ့ ချက်တာမို့ အရသာကထူးခြားလွန်းပါတယ်တဲ့။
Filed under ကိုရီးယား 1 ယောက်ပြောချင်ရာပြောသွားတယ်
ဒီကနေ့တော့ အချစ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဇာတ်လမ်းလေး တစ်ပုဒ်ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့ သူရဲ့ စီနီယာကောင်လေး တစ်ယောက်ရဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးပါ။
"ဟာ...ဘာဖြစ်နေတာလဲ..စိတ်ရှုပ်စရာ ကောင်းလိုက်တာ တခါတည်း..."
"အဲဒါကြောင့် ပြောတာပေါ့...အချိန်နည်းနည်းပေးပါလို့ ..."
"ကျွန်မမှာ အချိန်မရှိဘူးလို့ ပြောပြီးပြီဘဲ...ဒီလောက်ဆို တော်ပါတော့..."
"ကျွန်မ အစ်ကို့ကို မချစ်နိုင်ပါဘူးလို့ ပြောပြီးပြီဘဲ...ကျွန်မမှာ ချစ်သူရှိတယ်.."
"ဘာဘဲပြောပြော နင်ဟာ ငါ့ရဲ့ ဖူးစာရှင်ဘဲ... နင်လည်း တနေ့မှာ ငါ့ကို ချစ်လာလိမ့်မယ်... ငါကလည်း နင့်ကို အမြဲတမ်း စောက်ရှောက်ပေးမယ်...."
ကျွန်မတကယ်ကိုဘဲ စိတ်ကုန်လှပါပြီ။ ကျွန်မတို့ မေဂျာက စီနီယာ အစ်ကို တစ်ယောက်ပါ။ ကျွန်မ ကျောင်းတက်ခါစက fresher welcome လုပ်တုန်းက စတင် သိခဲ့တာပါ။ (မှတ်ချက်။ Korea တက္ကသိုလ်များတွင် fresher welcome လုပ်သည့်အခါ မေဂျာတူ စီနီယာများ အားလုံးတက်ရောက်ရသလို ကျောင်းသားသစ်များလည်း အားလုံး တက်ရောက်ရပါတယ်။ စုပေါင်းပြီး အရက်သောက်ကြတဲ့ ပွဲလို့လည်း မြင်လို့ ရပါတယ်)။ သူကို တခြားလူများလို အဖော်အပေါင်းတွေနဲ့ တွေ့လေ့ မရှိဘဲ တစ်ယောက်တည်းသာ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်မက အထီးကျန်ဆန်လွန်းသော သူ့ကို ဂရုဏာသက်ပြီး ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ဆက်ဆံခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီကတည်းက စပြီး ပြဿနာက စတော့တာပါဘဲ။ ကျွန်မ ဒီလို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ဆက်ဆံတာကို သူက သူ့ကို ကြိုက်တယ်လို့ ထင်မှတ်သွားဟန်ပါဘဲ။ သူ့အထင်နဲ့ သူပေမယ့်လည်း အခုလို ခဏခဏ စိတ်ရှုပ်စရာကောင်းလောက်အောင် လုပ်တတ်တာမို့ ကျွန်မ စိတ်ပျက်စိတ်ညစ်မိပါတယ်။
"အတန်းပြီးပြီလား..ဒီနေ့ ရာသီဥတုလေးကလည်း သာယာတော့ တစ်နေရာရာကို လမ်းလျှောက်ထွက်ကြမလား.........."
သူပြောလာတဲ့ စကားလေးပါ။ ကျွန်မ စိတ်ညစ်ရပြန်ပါသည်။
"အစ်ကို့ဘာသာ လမ်းဘဲလျှောက်လျှောက် ဘာဘဲလုပ်လုပ် ကျွန်မနဲ့ မဆိုင်ဘူး..ကျွန်မကတော့ ဒီနေ့ အလုပ်ရှုပ်နေတယ်... ဒါပဲ.."
"ကျွန်မတောင်းပန်ပါတယ်.. ကျွန်မတကယ်ကို တောင်းပန်ပါတယ်.. တော်ပါတော့နော်.. ဒီလောက်နဲ့တင် ရပ်ပါတော့.. ကျွန်မ အစ်ကို့ကို မကြိုက်ဘူး... ကဲ... သိပြီလား.."
တစ်ရက်နှစ်ရက်လည်းမဟုတ် နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဆိုတော့ ကျွန်မလည်း သည်းမခံနိုင်တော့ပါ။ သူကလည်း ကြာလာတာနဲ့ အမျှ ပိုပြီး မျက်နှာပြောင်တိုက်လာပါတယ်။ ကျွန်မတို့ အတန်းဖော်တွေ ရှေ့မှာတောင် မရှောင် ပြောချင်ရာကိုသာ စွတ်ပြောနေတော့ပါဘဲ။ အခုတော့ ကျွန်မ သူ့ကို မုန်းတောင်မုန်းလာပါတယ်။
"ဘာလို့လဲ.... နေမကောင်းဘူးလား.. စိတ်မကြည်လို့လား... "
ကျွန်မရဲ့ ချစ်သူက ကျွန်မရဲ့ မှုန်သိုးနေတဲ့ မျက်နှာကို ကြည့်ပြီး မေးလာခဲ့ပါတယ်။
"ဟာ...ကျွန်မတော့ သူ့ကြောင့် ရူးတော့မှာဘဲ...ကိုက နည်းနည်းလောက် သူ့ကို ဆုံးမပေးလို့ မရဘူးလားဟင်.."
"ကိုက...ကိုက သူ့ကို ဆုံးမပေးရမယ်...မဖြစ်ပါဘူး..."
ကျွန်မ ကျွန်မရဲ့ ချစ်သူကို ပြောကြည့်ပေမယ့်လည်း အလကားဖြစ်ခဲ့ရပါပြီ။ ကျွန်မချစ်သူတင်မကပါဘူး။ တခြားဘယ်သူ့ကိုမှ ပြောလို့မရဘူး။ အားလုံးက သူ့ကို ကြောက်တယ်ဆိုပြီး ရှောင်ပြေးကုန်ကြတာဘဲ။ ဘာကို ကြောက်ကြမှန်း ကျွန်မကတော့ နားကို မလည်နိုင်ပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့ဘဲ အချိန်တွေဟာ ကုန်မှန်းမသိ ကုန်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
တနေ့မှာ ကျွန်မတို့ မေဂျာမှ စီနီယာများ၊ ဂျူနီယာများ စုပြီး ထမင်းစားပွဲ လုပ်ကြပါတယ်။ အားလုံးနဲ့ အတူတူ အရက်သောက်ပြီး ပျော်ရွှင်ခဲ့ရပါတယ်(မှတ်ချက်။ ကိုရီးယားတွင် ထိုသို့သော ထမင်းစားပွဲများ အလွန်များပါသည်)။ အဲဒီ့နေ့က သူမပါလို့ ကျွန်မ ပို လွတ်လပ်ပြီး ပျော်နေမိတယ်လေ။ သူက ဒီလို လူတွေအများကြီးနဲ့ အတူတူ လုပ်ရတဲ့ ပွဲမျိုးကို မနှစ်သက်တာကြောင့် ဒီပွဲကို မလာခဲ့ပါဘူး။ ဒါနဲ့ဘဲ အားလုံး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သောက်စားပြီး ထမင်းစားပွဲလေး ပြီးဆုံးသွားပါတယ်။ ကျွန်မလည်း အဆောင်ကို ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ ညကလည်း နက်နေပြီမို့ လူသွားလူလာ သိပ်မရှိလှပါဘူး။ ဒီအချိန်မှာ ကျွန်မ သတိပြုမိတာ တစ်ခုက ကျွန်မနောက်မှာ လူလိုက်လာတယ်ဆိုတာပါဘဲ။ ကျွန်မလည်း ကြောက်ကြောက်နဲ့ စပြီး ပြေးတော့တာပါဘဲ။ သိပ်မကြာခင်မှာ ကျွန်မရဲ့ လက်ကို နောက်ကနေ ဖမ်းဆုတ်လာတဲ့ လက်ကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ ကျွန်မကြောက်လွန်းလို့ အော်မယ် အလုပ်တွင် တခြားတစ်ယောက်က ကျွန်မ ပါးစပ်ကို ပိတ်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်မ မျက်စိထဲမှာ ဘာမှ မမြင်တော့ပါ။ စိတ်ထဲကလည်း အဖေရယ် အမေရယ် သမီးကို ကယ်ပါလို့သာ ဆုတောင်းနေမိပါတယ်။ ကျွန်မကို သူတို့ ပြန်ပေးဆွဲဘို့ လုပ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာဘဲ ကျွန်မ သူ့ရဲ့ အသံကို ကြားလိုက်ရပါတယ်။ သူက ကျွန်မကို သူတို့တွေ လက်ထဲက ဆွဲထုတ်ပြီး အမြန်ပြေးလို့ အော်ပြောတယ်။ ကျွန်မကို ပြန်ပေးဆွဲဘို့ လုပ်တဲ့ လူတွေက ဓါးတွေ ဒုတ်တွေကို ကိုင်ပြီး ဆဲရင်းဆိုရင်းနဲ့ သူ့ဆီကို သွားနေကြပါတယ်။ ကျွန်မလည်း ကြောက်တာနဲ့ အဆောင်ကို အမြန်ဆုံးပြေးသွားခဲ့တယ်။ အဆောင်ရောက်တော့ လုံခြုံရေးဦးလေးကြီးတွေကို ပြောပြပြီးတော့ သူတို့တွေနဲ့ အတူ ကျွန်မလည်း သူရှိတဲ့ နေရာကို ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာတော့ သူဟာ သွေးသံရဲရဲနဲ့ လမ်းပေါ်မှာ လဲနေတာကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ ကျွန်မကတော့ သူသေပြီအမှတ်နဲ့ လိပ်ပြာလွင့်မတတ် လန့်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါနဲ့ သူ့အနားကို ပြေးသွားလိုက်တဲ့ အခါ သူက မျက်စိနှစ်လုံးကို ဖွင့်ပြီး ကျွန်မကို ပြောလိုက်တာကတော့...
"မနက်ဖြန် ဖိုက်တင်ကား သွားကြည့်ကြရအောင်..."
ကျွန်မငိုနေရာကနေ ရီချင်သွားပါတယ်။ ဒါနဲ့ဘဲ ကျွန်မ သူနဲ့ တွဲခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာ သူက အရင်နဲ့ မတူတော့ပါဘူး။ ကျွန်မကို ကယ်ပေးလို့လားတော့မသိပါ။ ကျွန်မကတော့ သူ့ကို အရင်လို မုန်းလို့ မရတော့ပါဘူး။ ကျွန်မ အခုတော့ သူ့ကို ကြည့်ပြီး ရင်လည်းခုန်တတ်လာပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ချစ်တာတော့ မဟုတ်ဘူးလို့ ထင်မိပါတယ်။ ပထမအကြိမ် date လုပ်ပြီးသွားတော့ သူဟာ အရင်လို ကျွန်မကို အချိန်နည်းနည်းလောက် ပေးပါလို့ပင် မပြောတော့ပါဘူး။ သူဒီလို အတင်းမတောင်းဆိုတော့တဲ့ အတွက် ကျွန်မ လွတ်လပ်သွားပေမယ့် နည်းနည်းတော့ ၀မ်းနည်းနေမိပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ ချစ်သူနဲ့လည်း စိတ်ဘောထားချင်း မတိုက်ဆိုင်လို့ လမ်းခွဲခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာ ကျွန်မ သူ့အကြောင်းကိုဘဲ တွေးနေမိပါတယ်။ ဘယ်အချိန်များ ငါ့ကို စကားလာပြောမလဲဆိုပြီး မျှော်လင့်နေခဲ့မိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူကတော့ ကျွန်မ သူ့ရှေ့ ဖြတ်သွားရင်တောင် နေကောင်းလားဆိုတဲ့ စကား တစ်ခွန်းလောက်သာ ပြောတတ်ပါတယ်။ ကျွန်မ အရမ်းကို စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိပါတယ်။ သူဘာကြောင့်များ ဒီလို လုပ်နေလဲဆိုတာကို ကျွန်မ နားမလည်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာ ကျွန်မဟာ အချိန်တိုင်း သူ့အကြောင်းကိုဘဲ တွေးနေခဲ့မိတယ်။ ဒိုင်ယာရီရေးတဲ့အခါမှာလည်း အားလုံး သူ့အကြောင်းတွေချည်းဘဲ ရေးမိပြီး ယောင်္ကျားတိုင်းကိုလည်း သူနဲ့ နှိုင်းယှဉ်နေမိပါတယ်။ အရက်သောက်ရင်လည်း အရက်ခွက်ထဲမှာ သူ့မျက်နှာကို မြင်ရောင်မိနေပြန်ပါရော။ တခါတလေ ငိုမိတဲ့ အခါတွေတောင်ရှိပါသေးတယ်။ သူ အနားမှာ ရှိတုန်းကတော့ သူ့ကို ခါးခါးသီးသီး ဆက်ဆံခဲ့တဲ့ ကျွန်မဟာ ခုလို ဝေးနေတော့မှ သူဟာ ကျွန်မဘ၀မှာ မရှိမဖြစ် လိုအပ်နေပါလားဆိုတာကို သိလာရပါတယ်။ အရင်တုန်းက ကောင်းကောင်းဆက်ဆံခဲ့ရ ကောင်းသားဆိုတဲ့ အတွေးဝင်မိပေမယ့် ကျွန်မက စပြီး ချဉ်းကပ်ဖို့ကိုတော့ မ၀ံ့မရဲ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ဘဲ တစ်နေ့ ညဘက်အဆောင်မှာ အိပ်နေတုန်း အသက်ရှူကြပ်လာလို့ မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ တံခါးကြားထဲကနေ မီးခိုးငွေ့တွေစိမ့်ဝင်နေတာကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ ဒါကို မြင်မြင်ချင်းဘဲ မီးလောင်နေပြီဆိုတဲ့ အတွေးဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ အလောတကြီးနဲ့ corridor ကို ထွက်ကြည့်လိုက်တော့ မီးခိုးငွေ့တွေနဲ့ ပြည့်လျှံနေတာကို တွေ့လိုက်ရတယ်လေ။ တခြား အဆောင်သူတွေလည်း ပြေးကြလွှားကြနဲ့ အဆောင်တစ်ခုလုံး ရှုတ်ရှက်ခတ်နေတာပါဘဲ။ ကျွန်မလည်းပြေးပြေး လွှားလွှားနဲ့ အောက်ထပ်ကို ပြေးဆင်းမယ်အလုပ်မှာ အောက်မှာ မီးအရှိန်အရမ်းပြင်းနေတာကို တွေ့လိုက်ရလို့ အောက်ကို ဆင်းလို့ မရတော့ပါ။ ဒါနဲ့ အပေါ်တက်မည် အကြံနဲ့ ပြေးသွားပြန်တော့ အပေါ်က လသာဆောင်တံခါး ပိတ်နေတာကြောင့် တတ်လို့ မရကြောင်းသိလိုက်ရပါတယ်။ ကျွန်မတို့ ဒီနေရာမှာဘဲ ပိတ်မိနေပါပြီ။ တစ်ချို့တွေကတော့ အော်ဟစ်ငိုနေကြပါပြီ။ ကျွန်မလည်း မျက်ရည်များ ကျခဲ့ရပါပြီ။ သေရတော့မယ်ဆိုတဲ့ အတွေးက ကျွန်မတို့အားလုံကို ပိုမို၍ ထိတ်လန့် ကြောက်ရွံ့စေခဲ့ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ တစုံတရောက်က ကျွန်မကို လှမ်းဆွဲလိုက်ပါတယ်။
ကျွန်မ ဘယ်သူဆိုတာမမြင်ရပေမယ့် သူမှန်းသိလိုက်ပါတယ်။ ဒီတော့ ကျွန်မ ခေါင်းညိတ်ပြလိုက်တယ်။
"ခု..ငါရောက်လာပြီဘဲ..ဘာမှ ကြောက်စရာ မလိုတော့ဘူးနော်.. မကြောက်နဲ့တော့..."
ကျွန်မချစ်သော သူရောက်လာပြီမို့ ကျွန်မ စိတ်အေးခဲ့ရပါပြီ။ ကျွန်မကို ဖက်ထားတဲ့ သူ့ကို ကျွန်မလည်း ပြန်လည် သိုင်းဖက်ရင်း သူ့ရင်ခွင်ထဲမှာ မျက်နှာအပ်ထားလိုက်ပါတယ်။
"ကဲ... ခု အောက်ကို ဆင်းကြမယ်.. ပူချင်ပူလိမ့်မယ်.. ဒီတော့ ဂွမ်းကပ်စောင်ကို ခြုံ.."
ပြောရင်းဆိုရင်းသူက ကျွန်မကို ဂွမ်းကပ်စောင်နဲ့ လွှမ်းခြုံပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်မတစ်ကိုယ်လုံး မွေ့ယာပေါ် ရောက်နေရသလိုပါဘဲ။ ရုတ်တရက် ကျွန်မခေါင်းထဲကို အတွေးတစ်ခု ၀င်လာတယ်။ မီးအရှိန် ဒီလောက်ပြင်းတာ သူဘယ်လိုလုပ်ပြီး ဒီအထိရောက်အောင် လာပါလိမ့်။ ကျွန်မ ဂွမ်းကပ်စောင်ကို အသာလှပ်ပြီး ကျွန်မကို ပွေ့ထားတဲ့ သူ့ရဲ့ မျက်နှာကို ကြည့်လိုက်မိတယ်။ သူ့မျက်နှာကို မြင်မြင်ချင်း ကျွန်မ စိတ်မကောင်းလွန်းသဖြင့် ငိုမိတော့တာပါဘဲ။ သူ့ရဲ့မျက်နှာ တစ်ခုလုံး မီးလောင်ထား၍ နီရဲနေပြီး ဆံပင်မှာလည်း မီးလောင်သွားသဖြင့် မရှိတော့ပါ။
"မြန်မြန် စောင်ကို ပြန်ခြုံ..အခု အောက်ကို ပြန်ဆင်းတော့မှာ.."
သူကျွန်မကို အော်ငေါက်လိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မ အရေးမလုပ်ပါဘူး။ ကျန်နေသေးတဲ့ အားအကုန်သုံးပြီး ကျွန်မကို ဖက်ထားတဲ့ သူ့ကို ကိုယ်ကနေ တွန်းခွာပစ်လိုက်ပါတယ်။
"အခု ဆင်းမသွားရင် သေသွားလိမ့်မယ်.. မြန်မြန် စောင်ကို ပြန်ခြုံ.."
"အစ်ကိုကော ဘယ်လို လုပ်မလဲ... "
ကျွန်မ စိုးရိမ်တကြီးနဲ့ မေးလိုက်မိတယ်။
"ငါလား.. ငါက မီးနတ်လေ..ငါက ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး... စိတ်မပူပါနဲ့... ကဲ စောင်ကိုသာ ပြန်ခြုံ.."
"ဟင့်အင်း... ကျွန်မကြောင့် ဒီလို....."
ကျွန်မ တရှုံ့ရှုံ့နှင့် ငိုချလိုက်ပါတယ်။ ဒီတော့သူက
"နင့်မျက်ရည်နဲ့တော့ ဒီမီးကို မငြိမ်းနိုင်ဘူး..."
ကျွန်မ သူ့ကို မော့ကြည့်လိုက်တော့
"ဒါပေမယ့် ငါ့ရဲ့ အချစ်က ဒီမီးကို ငြိမ်းနိုင်တယ်..."
ကျွန်မ သူ့ကို အတင်း ဖက်ထားလိုက်ပါတယ်.. သူက.........
"နင်..ငါ့ကို ချစ်လား.......... "
ကျွန်မဖြေလိုက်တယ်။ ရှက်လွန်းလို့ သူ့ရဲ့ ရင်ခွင်ထဲကို မျက်နှာအပ်ထားမိလိုက်တယ်။ ဒီအချိန်မှာဘဲ သူက မေးခွန်းတစ်ခု မေးလာတယ်။
"နင်..ငါပြောခဲ့တာကို မှတ်မိသေးလား...နင်ဟာ ငါ့ရဲ့ ဖူးစာရှင်...နင် တနေ့မှာ ငါ့ကို ချစ်လာမှာပါဆိုတာရော..ငါ..အမြဲတမ်း နင့်ကို စောင့်ရှောက်နေမယ်ဆိုတာရောကိုပေါ့..."
"ဒီလောက်မီးလေးနဲ့ ငါ့ကို သေအောင် သတ်လို့ မရပါဘူး။ စိတ်ချပါ...."
လို့ ပြောရင်း သူကျွန်မ မျက်နှာလေးကို သူ့လက်လေးနဲ့ ကိုင်ပြီး တချက်နမ်းလိုက်တယ်။ ပြီးတော့
"မနက်ဖြန်ဘယ်ကို သွားကြမလဲ.... "
သူကျွန်မကို ပွေ့ချီရင်း မေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီတော့ ကျွန်မက
"အစ်ကိုသွားတဲ့ နေရာအားလုံးကို လိုက်မယ်..."
ကျွန်မကိုယ် တစ်ကိုယ်လုံး တုန်နေခဲ့ပါတယ်။ သွားရင်းနဲ့ ရပ်လိုက်တဲ့ အခါလည်း ရှိသလို အရှိန်နဲ့ ပြေးသွားတဲ့ အခါလည်း ရှိပါတယ်။ ဘယ်လောက်ရောက်နေပြီလဲဆိုတာကို လည်း မသိပါ။ သို့သော်လည်း ကျွန်မ စိတ်အေးရပါတယ်။ ချစ်သူနဲ့ အတူ ရှိနေတဲ့ အတွက်ပေါ့။ ခဏနေတော့ လူတွေအားလုံးရဲ့ အော်သံတွေကို ကြားလိုက်ရပါတယ်။ အပြင်ရောက်လာပြီဆိုတာကို သိလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်မကို မြေပြင်ပေါ်မှာ ကျပြီး စောင်ကို ဖြေပေးကြပါတယ်။ ကျွန်မ မှောင်မဲနေတဲ့ မိုးကောင်းကင်ကြီးကို လှမ်းမြင်လိုက်ပါတယ်။ လူတွေက ကျွန်မကို ဘာဖြစ်သွားသေးလဲလို့မေးကြပါတယ်။ ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မ ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ တစ်ခုမှ မရှိလို့ တော်ပါသေးရဲ့လို့ တွေးလိုက်မိသေးတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်မ သတိမေ့သွားခဲ့တယ်။
ကျွန်မ မျက်စိနှစ်လုံး ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ ကျွန်မဆေးရုံကို ရောက်နေပါတယ်။ မီးခိုးငွေ့များကို အကြာကြီး ရှူရှိက်ခဲ့ရတာမို့ နေလို့တော့ သိပ်မကောင်းလှပါ။ ရုတ်တရက် ကျွန်မ သူ့ကို သတိရမိတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ကျွန်မ သူငယ်ချင်းတွေ အခန်းထဲကို ၀င်လာကြတယ်။
"ဟို စီနီယာအစ်ကို ဘယ်မှာလဲဟင်...."
သူငယ်ချင်းများရဲ့ မျက်နှာက ချက်ချင်းဆိုသလိုပင် ညှိုးငယ်သွားကြပြီး ကျွန်မအမေးကို ပြန်မဖြေကြပါ။
"သူဘယ်မှာလဲ...သူက ဒီဆေးရုံမှာ မဟုတ်ဘဲ..တခြားဆေးရုံမှာလား..."
သူငယ်ချင်းများရဲ့ တိတ်ဆိတ်မှုက ကျွန်မကို ပိုမို ထိတ်လန့်စေပါတယ်။
ဘုရားဘုရား သူ အသက် ရှင်နေပါစေ...ကျွန်မ စိတ်ထဲမှ ဆုတောင်းနေမိပါတယ်။
ကျွန်မ မယုံကြည်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ယုံလည်း မယုံချင်ဘူး။
ကျွန်မ ဘာမှ မပြောနိုင်ဘဲ မျက်ရည်တွေသာ အသွင်သွင် စီးဆင်းလာပါတော့တယ်။ ပြီးတော့ သူငယ်ချင်းများက စကားဆက်ပါတယ်။
"နင်တစ်ယောက်ဘဲ အသက်ရှင်တာ... မီးလောင်တုန်းက အားလုံးသေသွားတယ်... အားလုံးလည်း မကယ်နိုင်တော့ဘူးဆိုပြီး လက်လျှော့နေတုန်း သူက နင်တို့ အဆောင်ထဲကို ၀င်သွားတာ... ပြီးတော့ နင်ကို သယ်ပြီး ပြန်ထွက်လာတယ်.. နင်သတိမေ့သွားတဲ့ အချိန်မှာဘဲ သူဆုံးသွားတယ်..."
ကျွန်မ ပြတင်းပေါက်အပြင်ကိုသာ ကြည့်နေမိပါတော့တယ်။ အခုအချိန်မှာ ကျွန်မ လုပ်နိုင်တာဆိုလို့ ငိုရုံကလွဲပြီး မရှိပါတော့ပါဘူး။ တစ်သက်လုံး သူ့သာ ကျွန်မ ရင်ထဲမှာ ရှိနေတော့မှပါပဲ
Filed under ဝတ္ထုတို5ယောက်ပြောချင်ရာပြောသွားတယ်
ဒီကနေ့တော့ သူငယ်ချင်းနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ကို ဘာသာပြန် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ဗီယက်နမ်မှာ စစ်ပွဲတွေ အရှိန်ကောင်းကောင်းနဲ့ ဖြစ်နေတုန်းကပေါ့။ ဘယ်နေရာကမှန်းမသိ ပျံဝဲလာတဲ့ အမြှောက်ကျည်ဆံ တစ်ခုက မိဘမဲ့ဂေဟာ တစ်ခုပေါ်ကို ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။
၀ုန်းဆိုတဲ့ အသံနဲ့အတူ မိဘမဲ့ဂေဟာ ခေါင်မိုးကြီးဟာ ပြိုကြလာပြီး နံရံများဟာလည်း စတင် ပြိုကျလာပါတယ်။ မိဘမဲ့ဂေဟာမှာ အများစုက ကလေးများဖြစ်တာမို့ ကလေးတွေဟာ မပြေးတတ်၊ မရှောင်တတ်နဲ့ အုတ်ပုံတွေကြားထဲမှာ အသက်ပေးခဲ့ရတဲ့ သူတွေလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရထားတဲ့ ကလေးတွေထဲမှာ အသက်၈နှစ် အရွယ် ကောင်မလေးတစ်ယောက်လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီကလေးမလေးဟာ ချက်ချင်း သွေးသွင်းမှ အသက်ရှင်နိုင်မယ့် အခြေအနေမှာ ရောက်ရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမေရိကန်သူနာပြု စစ်သားတွေထဲမှာ ကလေးနဲ့ သွေးအုပ်စုချင်း တူတဲ့ လူ တစ်ယောက်တစ်လေတောင် မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါနဲ့ အမေရိကန် သူနာပြုများက တခြား မိဘမဲ့ ကလေးတွေဆီက သွေးရယူဘို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ မိဘမဲ့ ကလေးများဟာ ဗီယက်နမ် လူမျိုးများ ဖြစ်ပြီး အင်္ဂလိပ်စကားကို နားမလည်တဲ့အတွက် အမေရိကန်သူနာပြုများ သွေးရယူတဲ့ နေရာမှာ နည်းနည်း အခက်အခဲ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဟို ၈နှစ်အရွယ် ကလေးမက သွေးသွင်းဘို့ အလျင်လိုနေတာကြောင့် ဗီယက်နမ်လူမျိုး မိဘမဲ့ ကလေးများကို ခြေဟန်လက်ဟန်နဲ့ သွေးလှူဘို့ တိုက်တွန်းရတော့တာပေါ့။ အမေရိကန်သူနာပြုတွေက ဒီလို သွေးလှူဘို့ အတိုက်တွန်းခံရတယ့် ကလေးတွေအားလုံးဟာ ပွစိပွစိနှင့် သူတို့ အချင်းချင်း မြည်တွန်တောက်တီးနေကြပေမယ့် ဘယ်သူကမှ လှူမယ်လို့ မပြောခဲ့ပါဘူး။ အမေရိကန် စစ်သူနာပြုများကလည်း ဗီယက်နမ် စကားကို နားမလည်တာကြောင့် ကလေးများရဲ့ တုံ့ပြန်မှုကို စောင့်နေရုံကလွဲပြီး ဘာမှ မလုပ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေပေါ့။ ဒါနဲ့ အတော်ကြာတော့ ဟန်းဆိုတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်က သူ့သွေးကို လှူပါ့မယ်ဆိုပြီး လက်လေးကို ဖြေးဖြေးချင်းထောင်လာပါတယ်။ အမေရိကန်သူနာပြုတွေလည်း အလျင်လိုနေတာကြောင့် ခပ်သွက်သွက်ပဲ ကောင်လေးရဲ့ သွေးအမျိုးအစားကို စစ်ကြည့်လိုက်တော့ ကံကောင်းထောက်မစွာဘဲ ဒဏ်ရာရနေတဲ့ ကလေးမရဲ့ သွေးနဲ့ တူနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ ကောင်လေးရဲ့ သွေးကို စတင်ဖောက်ယူတဲ့ အခါမှာတော့ ဟန်းဟာ အရမ်းကို ကြောက်လန့်နေတဲ့ မျက်နှာကလေးနဲ့ အမေရိကန်စစ်သူနာပြုများကို တလှည့် ဒဏ်ရာရထားတဲ့ ကလေးမလေးကို တစ်လှည့် ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။ စပြီး သွေးထုတ်တဲ့ အချိန်ကစပြီး ဟန်း အငိုစတော့တာပါဘဲ။ သူနာပြုက ဟန်း....နာလို့လား လို့မေးပေမယ့် ဟန်းကတော့ ခေါင်းလေးကိုသာ ခါနေခဲ့ပါတယ်။ သူနာပြုလည်း ဟန်းဘာကြောင့် ငိုလဲဆိုတာကို သိချင်ခဲ့ပါတယ်။ သွေးလှူပြီးတဲ့အခါမှာ သူနာပြုက ဆရာဝန်နဲ့တွေ့ပြီး စောစောက သွေးလှူနေတုန်း ဟန်းဘာကြောင့်ငိုတာလဲ ဆရာလို့ မေးလိုက်တော့ ဆရာဝန်က နာလို့ ဖြစ်မှာပေါ့လေလို့ ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ သူနာပြုက
"နာလို့တော့ မဟုတ်ဘူးထင်တယ်ဆရာ...ကျွန်တော်က နာလားလို့ မေးတော့ သူ ခေါင်းခါတယ်။"
ခဏကြာတော့ သူနာပြုလေးက ဒဏ်ရာရထားတဲ့ ကလေးမနဲ့ ဟန်းရှိတဲ့ အခန်းကို သွားကြည့်ခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ သူနာပြုက ဟန်းကို ထလို့ရပြီလို့ ပြောလိုက်ပေမယ့် ဟန်းကတော့ ခေါင်းလေးကို တဘက်လှည့်ပြီး မျက်စိလေးကိုသာ မှိတ်ထားလိုက်ပါတယ်။ ဒီတော့ သူနာပြုက ကလေးက မထချင်သေးလို့နဲ့ တူတယ်ဆိုပြီး ဒီတိုင်းထားလိုက်ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာဘဲ ဒဏ်ရာရထားတဲ့ ကလေးမလေးရဲ့ တအင်းအင်းနဲ့ ညည်းညူသံလေးကို ကြားလိုက်ရပါတယ်။ ကလေးမလေး သေမင်းတံခါးဝကနေ ပြန်လာနိုင်ပါပြီ။ ဒီအချိန်မှာဘဲ တခြား ဆေးရုံမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ဗီယက်နမ်လူမျိုး သူနာပြု တစ်ယောက်က မိဘမဲ့ဂေဟာကို ခဏလာတာကို အမေရိကန်သူနာပြုလေးက လှမ်းမြင်လိုက်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ ဗီယက်နမ် လူမျိုး သူနာပြုကို ဟန်း ဘာကြောင့်ငိုလဲဆိုတာကို မေးပေးရန် တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဗီယက်နမ်လူမျိုး သူနာပြုကလည်း မေးပေးပါ့မယ်ဆိုပြီး ဟန်းနဲ့ စကားပြောတော့တာပေါ့။ ခဏကြာတော့ ဗီယက်နမ်လူမျိုး သူနာပြုဆီက အသံ တစ်ခုထွက်လာတယ်။
"ဘုရား..ဘုရား...ဟန်းက ခင်ဗျားတို့ ပြောတာကို အထင်လွဲနေတာ။ ဟန်းက သွေးလှူရင် သူသေမယ်လို့ ထင်လို့ ငိုနေတာတဲ့..။ "
သူနာပြုတွေလည်း ခုမှ နားလည်ဟန်နဲ့ ခေါင်းလေးညိတ်၍သာ နေကြပါတယ်။ ဗီယက်နမ် လူမျိုး သူနာပြုကတော့ ဟန်းကို ခုလို မေးလိုက်ပါတယ်။
"ဟန်း...မင်း ဟာ သေမယ်ဆိုတာကို သိရဲ့သားနဲ့ ဘာလို့ သွေးလှူဘို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလဲ။ "
ဒီနေ့တော့ ကိုရီးယား ဆိုက်များကို လိုက်လံ ဖတ်ရှုရာမှ သဘောကျမိသော ဝတ္ထုတိုလေးတစ်ပုဒ်ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ကိုရီးယားမှာရှိတဲ့ အမေတစ်ယောက်နဲ့ သမီးတစ်ယောက်ရဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးပါ........
အမေ့ရဲ့ အော်သံကြောင့် မျက်စိများ ပွင့်ခဲ့ရပါပြီ။ အမြဲတမ်း လုပ်နေကျအတိုင်း အိပ်ယာကနေ နိုးနိုးချင်း မှန်တွေ ကွဲအက်နေတဲ့ နံရံကပ် နာရီကို လှမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်။ နာရီကို ကြည့်ပြီးတာနဲ့ ကျွန်မဟာ မျက်မှောင်ကြုတ်ရင်း အမေ့ကို ဘာလို့ ခုမှ နှိုးတာလဲ..နောက်ကျကုန်ပြီ...စိတ်တိုဘို့ ကောင်းလိုက်တာ ဆိုပြီး အော်ပြောလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အခန်းတံခါးကို ဒုန်းခနဲ မြည်အောင်ဆောင့် ပိတ်ပြီး ကျောင်းသွားဘို့ အလောတကြီးနဲ့ ပြင်ဆင်နေခဲ့ပါတယ်။ (မှတ်ချက်။ ကိုရီးယားမှ အထက်တန်းကျောင်း၊ အလယ်တန်းကျောင်းများမှာ ကျောင်းနောက်ကျလျှင် ပြင်းပြင်းထန်ထန် အပြစ်ပေးတတ်ပါသည်။) အားလုံးပြင်ဆင်ပြီး ကျောင်းသွားဘို့ အိမ်ကထွက်မည်အလုပ်တွင် ကျွန်မနောက်ကနေ အမေ့အသံကို ကြားလိုက်ရပါတယ်။
ကျွန်မက ကျောင်းကလည်းနောက်ကျ စိတ်ကလည်းတိုနေတော့ အမေ လှမ်းပေးတဲ့ ထမင်းဘူးကို ကြမ်းပြင်ပေါ်ကို ပစ်ချပြီး တော်ပြီ..မစားတော့ဘူး..ကျောင်းဘဲ သွားတော့မယ် ..ဆိုပြီး ကျွန်မ အိမ်မှ ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ အမေ့ကို ဂရုမစိုက်ဘဲ ကျွန်မ ကျောင်းသွားမယ့် လမ်းကို ပြေးထွက်လာရင်း နောက်ကို တချက် ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ အမေဟာ တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်လေး ကျွန်မ ပစ်ချခဲ့တဲ့ ထမင်းဘူးကို ပြန်လည် ကောက်ယူနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အမေ့မျက်နှာက တကယ်ဘဲ ဖြူစွတ်နေတာကိုလည်း တွေ့လိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမေက အမြဲတမ်း ဖျားနာနေကျမို့ ကျွန်မလည်း သိပ် စိတ်မပူဘဲ ကျောင်းသို့သာ ဦးတည်ပြီး သွားခဲ့ပါတော့တယ်။
ကျောင်းစတတ်တဲ့ အချိန်မှာ သတင်းတစ်ခုကို သိရပါတယ်။ ဒီအပတ် စနေနေ့ကို လေ့လာရေးခရီး ထွက်ရပါမယ်တဲ့။ ကျွန်မလည်း အရမ်းကို သွားချင်ခဲ့ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းများနဲ့လည်း အတူတူ လျှောက်လည်ချင်သလို ဆင်းရဲခြင်းဆိုတာကိုလည်း တခဏလောက် မေ့ထားချင်ပါတယ်။ နောက်တခုက အမြဲတမ်း အိပ်ယာထဲ လဲနေတဲ့ အမေ့ကို လည်း ခဏလောက် မေ့ထားပြီး သူငယ်ချင်းများနဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဆော့ကစားချင်ပါတယ်။ ညနေ ကျောင်းဆင်းလို့ အိမ်ကို ပြန်ရောက်တော့ အမေ့ကို ထုံးစံအတိုင်း အိပ်ယာထဲမှာ လှဲနေတာကို မြင်ရပါတယ်။ အမေ့ကို မြင်တာနဲ့ စိတ်ထဲမှာ မကြေနပ်ချက်တွေ ပေါ်လာတော့တာပါဘဲ။ အမေကတော့ ကျောင်းကပြန်လာတဲ့ ကျွန်မကို ပြုံးပြုံးလေး လှမ်းကြည့်ပြီး သမီးလေး....ပြန်လာပြီလား လို့မေးပါတယ်။ အမေက မေးတာကို ပြန်မဖြေဘဲ
အမေက ကုန်ကျစရိတ်ကို အရင်မေးတယ်။ ကျွန်မလည်း ကျွန်မတို့ မိသားစု အခြေအနေကြောင့် သွားရကောင်းမလား မသွားရကောင်းမလား ဝေခွဲမရ ဖြစ်နေပြီးမှ ၈ သောင်းပါ..အမေ လို့ ပြန်ဖြေခဲ့တယ်။ (မှတ်ချက်။ကိုရီးယားနိုင်ငံသည် ငွေကြေးဖောင်းပွသော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။) ကျွန်မအဖြေကို ကြားတော့ ကျွန်မအမေက ၈...၈သောင်းကြီးများတောင် ဟု ပြန်၍မေးသည်။ ကျွန်မက အမေ့ကို အသံကျယ်ကြီးနှင့် ဘာလဲ...၈သောင်းတောင် မရှိဘူးလား ဟူ၍ ပြန်မေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်မ ဒီလို ဆင်းရဲတာမျိုးကို အရမ်းမုန်းပါတယ်။ လူတန်းစေ့ မနေနိုင်တဲ့ ကျွန်မဘ၀ကို စဉ်းစားမိတိုင်း စိတ်ပျက်အားငယ်မိပါတယ်။ အမေ့ကိုလည်း မုန်းတယ်။ ကျွန်မရဲ့ မိသားစုဝင်ဟာ အမေတစ်ယောက်တည်းသာ ရှိတယ်ဆိုတဲ့ အမှန်တရားကိုလည်း မုန်းမိပါတယ်။ အမေက ခဏတာ သက်ပြင်းချပြီး စောင်အောက်ကနေ ဘဏ်စာအုပ်တစ်ခုကို ထုတ်ပေးပါတယ်။ ဒီမှာ အမေ တစ်ပြားနှစ်ပြား စုထားတဲ့ ငွေလေးတွေ....ဒီထဲကနေ ၈သောင်းထုတ်ပြီးသွားချေ။ ကျွန်မမွေးကတည်းကစပြီး ပထမဆုံးအကြိမ် မြင်ဘူးတဲ့ ဘဏ်စာအုပ်ကို ကြည့်ပြီး ကျေနပ်စွာ ပြုံးလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အမေ့ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ စကားတစ်ခွန်းတောင် မပြောဘဲ မြို့ထဲမှာ ရှိတဲ့ ဘဏ်ကို အပြေးလေး သွားခဲ့ပါတယ်။
ဘဏ်စာအုပ်ကို ဖြန့်ကြည့်လိုက်တော့ ၁၀သိန်းရှိနေတာကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ ကျွန်မအတွက်ကတော့ အရမ်းကို ပမာဏများတဲ့ ငွေပါဘဲ။ ဒီအချိန်အထိ ဒီငွေတွေကို ဘာလို့ မသုံးတာပါလိမ့်ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ အမေ့ကို နည်းနည်း အမြင်ကတ်မိလိုက်ပါသေးတယ်။ ပြီးတော့ လေ့လာရေးခရီးအတွက် ၈သောင်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။ ဘဏ်ထဲမှာ ၉သိန်း၂သောင်းကျန်ပါသေးတယ်။ ၉သိန်း၂သောင်းတောင် ရှိတာ ထပ်ထုတ်လဲ ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူးဆိုတဲ့ အတွေးဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ ခုခေတ်က လူတိုင်း လက်ကိုင်ဖုန်းကိုင်နေတဲ့ ခေတ်ဖြစ်ပေမယ့် ကျွန်မမှာ လက်ကိုင်ဖုန်းမရှိတာကို သတိရမိတာနဲ့ လက်ကိုင်ဖုန်းကောင်းကောင်း တစ်ခု ၀ယ်ဘို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ဒါနဲ့ ဘဏ်ထဲကနေ နောက်ထပ် ၄သိန်း ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ အနီးအနားမှာ ရှိတဲ့ လက်ကိုင်ဖုန်းအရောင်းဆိုင်ကို သွားပြီး နောက်ဆုံးပေါ် လက်ကိုင်ဖုန်းတစ်ခု ၀ယ်လိုက်တယ်။ ပျော်လိုက်တာလေ..ကျွန်မဘ၀မှာ တခါမှ မရဘူးတဲ့ ပျော်ရွှင်မှုမျိုးကို ကျွန်မ ခံစားခဲ့ရပါတယ်။ ဒါနဲ့ ဖုန်းအသစ်ကလေးကို ကိုင်ပြီး မြို့ထဲကို လျှောက်လည်နေခဲ့မိတယ်။ အဲဒီမှာ အရောင်အသွေးတွေကလည်း စုံ၊ ဒီဇိုင်းတွေကလည်း မိုက်တဲ့ အ၀တ်အစားလှလှလေးတွေကို မြင်တော့ ကျွန်မ ၀ယ်ချင်ပြန်ရော။ ဒါနဲ့ ဘဏ်ကို နောက်တစ်ခါ ထပ်သွားပြီး ၂သိန်းထပ်ထုတ်လိုက်တယ်။ အင်္ကျီတွေအများကြီး ၀ယ်လိုက်တယ်။ တထည်ပြီး တထည် စမ်းဝတ်လိုက် မှန်ကြည့်လိုက်နဲ့ အရမ်းကို ကျေနပ်နေခဲ့တယ်။ မှန်ကြည့်နေရင်းက သဘောမကျစရာတစ်ခု မျက်စိထဲကို ၀င်လာတယ်။ အဲဒါကတော့ အမေ ညှပ်ပေးတဲ့ ဆံပင်ပုံစံကြီးပါဘဲ။ တောဆန်ပြီး ပုံတုန်းလိုက်တာ လွန်ရော။ ဒီဆံပင်ပုံစံကို ပြောင်းဘို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ နောက်တခေါက် ဘဏ်ကို သွားတယ်။ ၅သောင်းထပ်ပြီး ထုတ်လိုက်တယ်။ ဆံပင်ပုံစံ လှလှလေး ညှပ်တယ်။ ကဲ...အားလုံး အိုကေပြီ။ စနေနေ့ လေ့လာရေး ခရီးထွက်ရန် လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ ၀ယ်ဘို့သာ လိုအပ်တော့တာမို့ ကျွန်မ ဘဏ်ထဲမှာ ကျန်တဲ့ ငွေတွေနဲ့ လိုအပ်တာတွေအားလုံးကို စွတ်ဝယ်ခဲ့ပါတယ်။ အားလုံးဝယ်ပြီးတော့ ၉သောင်းသာ ကျန်ပါတော့တယ်။ ကျွန်မလည်း သူများနည်းတူ ၀တ်နိုင်စားနိုင်ပြီမို့ အတိုင်းထက်အလွန် ၀မ်းသာနေခဲ့မိပါတယ်။ ကျွန်မကြိုက်တာတွေအားလုံး လုပ်ပြီးပြီဖြစ်၍ စိတ်ပျက်စရာကောင်းသော အိမ်သို့ ခြေလှမ်းခဲ့ပါတယ်။
အိမ်ရောက်တော့ အမေအိပ်နေတာကို တွေ့လိုက်ရတယ်။ အဟွန်း..အဟွန်း ကျွန်မ တမင်တကာ အသံပြုလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်မအသံကို ကြားတော့ အမေ နိုးလာတယ်။ ကျွန်မလည်း အမေ့ကို ဘဏ်စာအုပ်လေး ပြန်ပေးလိုက်တော့ အမေက ဘဏ်ထဲ ငွေဘယ်လောက်ကျန်သည်ကိုပင် ကြည့်မနေဘဲ ဘဏ်စာအုပ်လေးကို စောင်အောက်ထဲ ထိုးထည့်ထားလိုက်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ဘဲ စောင့်မျှော်နေခဲ့တဲ့ စနေနေ့ကို ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ လှလှပပ သားသားနားနား ၀တ်စားသွားတဲ့ကျွန်မကို သူငယ်ချင်းတွေက အားကျနေတာကို မြင်ပြီး ကျွန်မ ကျေနပ်နေမိပါတယ်။ ၂ညအိပ်၃ရက်ခရီးကို သူငယ်ချင်းများနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းခဲ့ပါတယ်။ ဒီရက်ပိုင်းတွေမှာတော့ ဆင်းရဲခြင်းနဲ့ အမြဲတမ်းမမာနေသော အမေ့ကို ခဏတာ မေ့ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ တကယ်ကို ပျော်စရာကောင်းခဲ့တဲ့ နေ့ရက်တွေပေါ့။
ခုတော့ ၂ညအိပ် ၃ရက်ခရီးဟာ ပြီးဆုံးခဲ့ပါပြီ။ ဒီလို ပျော်စရာကောင်းတဲ့ အချိန်တွေဟာ မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ။ ထပ်မံပြီး စိတ်ပျက်စိတ်ညစ်စရာကောင်းသော အိမ်ကို ပြန်ရအုံးမှာပါလားဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ ကျွန်မ ခြေလှမ်းတွေ လေးနေခဲ့ပါတယ်။ ခြေလှမ်းလေးလေးနဲ့ဘဲ အိမ်ကို ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ အိမ်ကို ပြန်ရောက်တာနဲ့ ကျွန်မက အမေ...သမီး ပြန်လာပြီ။ ဟု အော်ပြောလိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် အိမ်ကြီးဟာ ထူးဆန်းအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် တိတ်ဆိတ်နေခဲ့ပါတယ်။ ဒါနဲ့ ထပ်ပြီး အမေ..သမီး ပြန်လာပါပြီဆိုနေမှ ဟူ၍ ထပ်မံ အော်လိုက်တယ်။ ဒါလည်း ဘာအသံမှ မကြားတာနဲ့ ကျွန်မ တော်တော် စိတ်တိုသွားတယ်။ စိတ်တိုတိုနဲ့ အိပ်ခန်းတံခါးကို ဒုန်းခနဲ မြည်အောင် စောင့် ဖွင့်လိုက်တော့ အမေက အိပ်ယာထဲမှာ လှဲနေတာကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ အမြဲတမ်း ကျွန်မ ပြန်လာလျှင် ပြုံးပြီး ကြိုတတ်တဲ့ အမေက ယခု ကျွန်မ ပြန်လာတာကို ဘာစကားမှ ပြန်မပြောခဲ့ပေ။ ကျွန်မ ပိုက်ဆံတွေအများကြီး သုံးခဲ့လို့ အမေ စိတ်ဆိုးနေတယ် အထင်နှင့် အမေ့ကို လှုပ်နှိုးလိုက်တဲ့ အခါမှာတော့ အမေ့ တစ်ကိုယ်လုံး အေးစက်နေတာကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ မျက်လုံးတွေထဲမှာ ခန်းခြောက်ခဲ့ပြီ ဖြစ်တဲ့ မျက်ရည်တွေဟာ ထူဆန်းစွာဘဲ ကျဆင်းလာခဲ့သလို ကျွန်မရဲ့ နှလုံးသားတွေဟာလည်း ရပ်တန့်သွားမတတ် လန့်သွားခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မ ဒီလောက်မုန်းခဲ့တဲ့ အမေ အေးစက်နေတာကို တွေ့လိုက်တော့ ကျွန်မ အရမ်းကို ၀မ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်။ ယုံလည်း မယုံနိုင်ဘူး ဖြစ်နေခဲ့တယ်။ ဒါနဲ့ အမေ့ကို အတင်း လှုပ်၍သာ နှိုးနေခဲ့မိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမေဟာ ကျွန်မ ဘယ်လောက်ဘဲ နှိုးနှိုး နိုးထမလာခဲ့တော့ပါဘူး။ ဒါနဲ့ စောင်ထဲက ဘဏ်စာအုပ်ကို ယူပြီး အမေ့ မျက်စိနားကို ကပ်ကာ အမေ...သမီး နောက်ကို ဒီလို မလုပ်တော့ပါဘူး ....ဒီလိုဘယ်တော့မှ မလုပ်တော့ပါဘူး...မျက်စိလေး ဖွင့်ကြည့်ပါ အမေရယ်....ဆိုပြီး ကျွန်မ အော်ဟစ်ငိုနေခဲ့မိပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာဘဲ ဘဏ်စာအုပ်ထဲက တစုံတခု ထွက်ကျလာတာကို မြင်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ အမေ့ရဲ့ နောက်ဆုံးစာပါဘဲ။ ကျွန်မ မရဲတရဲနဲ့ ဖြန့်ကြည့်မိပါတယ်။
ဒီစာကို ဖတ်ပြီးတဲ့ အခါမှာ ကျွန်မကိုယ် ကျွန်မ မုန်းတီး စက်ဆုတ်လာမိပါတယ်။ အမေ့ကို မုန်းခဲ့တာထက် အဆ၁ထောင် ၁သောင်းမက ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မ မုန်းတီးမိပါတယ်။ သမီး သုံးခဲ့တဲ့ ငွေတွေက ခွဲစိတ်ခတွေ..ခွဲစိတ်ခတွေ အမေရယ် ဘာလို စောစောက မပြောခဲ့တာလဲ။ သမီးလို အမေ့ စေတနာကို နားမလည်တဲ့ လူကို ဒီလောက်တောင် ချစ်ရလား။ နောက်ဆို ကျောင်းသွားဘို့ နှိုးပေးတဲ့ အမေ့ အသံကို လည်း မကြားနိုင်တော့ဘူး။ အမေ ထုတ်ပေးတဲ့ ထမင်းဘူးလေးကိုလည်း မစားနိုင်တော့ဘူး။ အိပ်ယာထဲမှာ လှဲနေတဲ့ အမေ့ကိုတောင် မမြင်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ အသိတွေနဲ့ ကျွန်မ ရူးမတတ် ၀မ်းနည်းခံစားနေရပါတယ်။ အမေရယ် နောင်ဘ၀ဆိုတာရှိခဲ့ရင် သမီး အမေနဲ့ ပြန်တွေ့ချင်ပါတယ်။ အမေ့ကို မပေးခဲ့ရတဲ့ သမီးရဲ့ မေတ္တာတွေကိုလည်း ပေးချင်ပါတယ်။ ဒီလို အတွေးတွေကို တွေးရင်း ကျွန်မ အတော်ကြာအောင် ငိုပြီးမှ အမေ့ကို တစ်ခါမှ မပြောဘူးတဲ့ စကားလေး တစ်ခွန်းကို ပြောဘို့ သတိရခဲ့ပါတယ်။ သတိရရချင်း ကျွန်မ အမေ့ကို ကြည့်ပြီး ပြောလိုက်ပါတယ်။
အမေနဲ့ ကတောက်ကဆ ဖြစ်တဲ့ အခါမှာဘဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အမေ့ကို စိတ်ဆိုးမိတဲ့ အခါမှာ ဘဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အမေ့ကို နာကြည်းမိတဲ့ အခါမှာ ဒီစာလေးကို ပြန်သတိရပြီး စိတ်ထားလေးတွေကို ပြောင်းနိုင်ကြပါစေ။ အမေတွေအားလုံးဟာ ကိုယ့်သားသမီးကို အသက်နဲ့ရင်းပြီး ချစ်ခင်တယ်ဆိုတာကို သတိရစေဘို့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတဲ့ ကိုရီးယား ၀ထ္ထုတိုလေး တစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့တော့ ကိုရီးယားsite တစ်ခုကို မွှေနှောက်ရှာရင် ဖတ်ရှုရတဲ့ စာစုလေး တစ်ခုကို တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ စိတ်နဲ့လည်း အတော် တိုက်ဆိုင်နေတာမို့ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
ယောင်္ကျားသားများ အမြင်မှာ သိပ်နှစ်သက်ဖွယ် မကောင်းသောမိန်းမများ
၁. အရမ်းကို over ဖြစ်နေတတ်တဲ့ မိန်းကလေးများ
၂. မိတ်ကပ်ကို ပြစ်ထူနေအောင် လိမ်းတတ်သော မိန်းကလေးများ
၄. သူများစကားကို နားထောင်လေ့ မရှိဘဲ သူပြောချင်တာကို စွတ်ပြောတတ်သော မိန်းကလေးများ
၅. သူ့ပိုက်ဆံအကုန်သက်သာအောင် အနားကို အတင်းကပ်နေတတ်သော မိန်းကလေးများ
၆. အစစ်အမှန်ဆိုတာကို သူ့ရဲ့ ကိုယ်မှာ ရှာလို့ မတွေ့နိုင်သော မိန်းကလေးများ
၇. အမြဲတမ်း အလွဲလွဲ အချော်ချော်များကိုဘဲ လုပ်နေတတ်သော မိန်းကလေးများ
၈. အဆဲအဆို သန်သော မိန်းကလေးများ
၉. လုံးဝကို ပြင်ပြင်ဆင်ဆင် မနေတတ်သော မိန်းကလေးများ
၁၀. သူဟာသာ တလောကလုံးမှာ အတော်ဆုံး၊ အတတ်ဆုံးဟု ထင်တတ်ကြသော မိန်းကလေးများ
၁၁. ယောင်္ကျားတစ်ယောက်ကို အရာဝထ္ထု တစ်ခုလို သဘောထားတတ်ကြသောမိန်းကလေးများ
ဒီလို မိန်းကလေးမျာကိုတော့ အမျိုးသာများက သိပ်ပြီး မနှစ်သက်ကြပါဘူတဲ့။ လူတစ်ကိုယ် အကြိုက်တစ်မျိုးမို့ မတူနိုင်တဲ့ အချက်တွေလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ယေဘူယျ သဘောတရားကို ဖော်ပြထားတာမို့ တစ်ခေါက်လောက် လေ့လာတာလည်း မှားတယ် မဆိုနိုင်ပါဘူး။ ဒီစာကို ဖတ်မိတဲ့ အမျိုးသမီးများကတော့ ကိုယ်ဟာ ဒီ ၁၁မျိုးထဲမှာ မပါဘို့ ရှောင်သင့်တာ ရှောင်နိုင်တာပေါ့နော်။
မိန်းကလေးများ အမြင်မှာ နှစ်သက်ကျေနပ်မှုကို မပေးနိုင်သော ယောင်္ကျားသားများ
၁. သဘောထား သေးသိမ်သော ယောင်္ကျားများ
၂. ခေတ်ရေစီးကြောင်းကို အလွန်အကျွံ လိုက်စားတတ်သော ယောင်္ကျားများ
၃. အားနွဲ့ဟန်၊ သိမ်မွေ့ဟန် ဆောင်တတ်သော ယောင်္ကျားများ
၄. ကတ်စီး အရမ်းနည်းတတ်သော ယောင်္ကျားများ
၅. သူတပါးအတွက် စဉ်းစားပေးလေ့ မရှိဘဲ ကိုယ့်အကြောင်းကိုဘဲ ကြည့်တတ်သော တကိုယ်ကောင်းဆန်သော ယောင်္ကျားများ
၆. ရည်းစားဘ၀မှာ ကိုယ့်ရဲ့ ချစ်သူကို event တစ်ခုတစ်လေတောင် လုပ်မပေးတတ်သော ယောင်္ကျားများ
၇. စကားအလွန်များသော ယောင်္ကျားများ
ဂ. ငွေရေးကြေးရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စီမံခန့်ခွဲပြီး မသုံးတတ် မစွဲတတ်သော ယောင်္ကျားများ
၉. သူငယ်ချင်းများကို ဆဲဆိုနေတတ်သော ယောင်္ကျားများ
၁၀. အပြောင်းအလဲ မြန်ဆန်သော ယောင်္ကျားများ
၁၁. နှာဘူးကျလွန်းပြီး အသားအရမ်းယူတတ်သော ယောင်္ကျားများ
ဒီလို ယောင်္ကျားအမျိုးအစားများကိုတော့ မိန်းကလေးများက မနှစ်သက်ကြပါဘူးတဲ့။ ဒါဟာလည်း လူတစ်ကိုယ် အကြိုက်တစ်မျိုးမို့ မိန်းကလေးအားလုံးဟာ ဒီလိုပါလို့တော့ ပြောလို့မရပါဘူး။ အရင်တစ်ခေါက် ရှောင်သင့်သောမိန်းမများ အကြောင်းရေးတုန်းက အစ်ကို တစ်ယောက်က မျှမျှတတ ရေးပါဆိုလို့ ခုတခါတော့ အားလုံးကို ၁၁ချက်စီ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Filed under လူ့စရိုက်, ရှောင်သင့်သော 8 ယောက်ပြောချင်ရာပြောသွားတယ်
လူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေကို သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ဟန်အမူအရာမှာ ဖော်ပြတတ်ကြပါတယ်။ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာ အရေးကြီးတဲ့ သူတပါးကို အကဲကောင်းကောင်းခတ်တတ်ဘို့အတွက် ဒီကနေ့တော့ ကိုယ်ဟန်အမူအရာကို ကြည့်ပြီး သိနိုင်မဲ့ လက္ခဏာတချို့ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၁. နံပါတ် ၁ ပုံကို ကြည့်ချင်းအားဖြင့် သိရှိနိုင်တာကတော့ ဒီလိုပါ။ အကယ်၍ အလုပ်သဘောအရဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စနဲ့ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် အသိမိတ်ဆွေများနဲ့ တွေ့ဆုံရတဲ့ အခါများ ရှိတတ်ပါတယ်။ ဒီလို တွေ့ဆုံတဲ့ အခါမှာ အချင်းချင်း ထိုင်ရင်း စကားပြောတဲ့ ပုံစံကို ကြည့်ပြီး တဘက်သူရဲ့ ကိုယ့်အပေါ်မှာ ထားတဲ့ စိတ်ထားကို ခန့်မှန်းလို့ ရနိုင်ပါတယ်။ တဘက်လူက ဒီပုံလေးထဲက အမျိုးသားလို ကိုယ့်ဘက်ကို ကိုင်းပြီး ပြောတယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ သဘောထားတွေကို ထောက်ခံနေတဲ့ ပုံစံမျိုး ဖြစ်ပြီး ကိုယ်နဲ့လည်း တကယ့်ကို ခင်မင် ရင်းနှီးချင်တဲ့ စိတ်လည်း ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလို မဟုတ်ဘဲ တဘက်လူက ပုံလေးထဲက အမျိုးသမီးလိုမျိုး နောက်ကို ယိမ်းပြီး ပြောနေတယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒီလူဟာ ကိုယ်နဲ့ သဘောထား အနည်းငယ် ကွဲလွဲနေတာမျိုး ဖြစ်တတ်သလို ကိုယ့်ကို သတိထားပြီး ဆက်ဆံနေတာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့။
၂. နံပါတ် ၂ ပုံကို ကြည့်ရင်တော့ ဒီလိုသိနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့စကားပြောနေရင်းကနေပြီး ထိုင်ခုံမှာမှီ ခြေထောက်ကိုကားထားတတ်တဲ့ လူအချို့ကိုလည်း မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလို လုပ်လိုက်တဲ့ လူရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ကိုယ့်ကိုကို သိပ်အထင်ကြီးနေတာမျိုး၊ ဒီ စကားဝိုင်းမှာတော့ ငါသာလျှင် အဓိကလို့ ထင်တတ်သူများ ဖြစ်တတ်ပါတယ်တဲ့။ ဒါ့အပြင် ကိုယ်နဲ့ စကားပြောနေရင်း ဒီပုံလေးထဲကလို လုပ်တတ်သူများက ကိုယ့်ကို အနည်းနဲ့ အများ အထင်သေးနေတယ် ဆိုတာကိုလည်း သိနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်မအထင်တော့ တဘက်လူနဲ့ စကားပြောနေတုန်း ဒီလို အပြုအမူမျိုးကို လုပ်တာဟာ ရိုင်းပြတယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။
၃. နံပါတ် ၃ မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အမျိုးသမီးလိုမျိုး စကားပြောနေရင်းကနေ ရုတ်တရက် လက်ပိုက်တတ်တာမျိုးကိုလည်း ကျွန်မတို့ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အနည်းနဲ့ အများ မြင်တွေ့နိုင်မှာပါ။ ဒါကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် သိနိုင်တာကတော့ သူဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သက်တောင့်သက်သာမရှိဘူးဆိုတာပါဘဲ။ အဲဒီလို စကားပြောရင်း လက်ပိုက်ခြင်းဟာ သူ့မှာ အဆင်မပြေမှု တခုခု ရှိတယ်ဆိုတာကို ဖော်ပြတာနဲ့ တူပါတယ်တဲ့။ လူတွေဟာ စိတ်မကြေနပ်မှုရှိလို့ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် တခုခုကို အလိုမကျတဲ့ အခါမှာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒီလို လက်ပိုက်ခြင်းအားဖြင့် ဖော်ပြတတ်ပါတယ်တဲ့။
၄. ပုံနံပါတ် ၄ မှာ ဖော်ပြထားသလို စကားပြောနေရင်းနဲ့ စားပွဲကို လက်နဲ့ ထောက်ထားတဲ့ လူကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဒီလို အချက်တွေကို သတိပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုလူမျိုးဟာ သူတို့ကိုယ်သူတို့ အခွင့်အာဏာ ရှိသူလို့ ယုံကြည်မှု ပြင်းထန်သူများ ဖြစ်ပါတယ်။ ငါဟာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူဘဲဆိုတာကို ဖော်ပြနေတာနဲ့ တူပါတယ်တဲ့။
၅. ပုံနံပါတ် ၅မှာလို စကားပြောရင်းနဲ့ ခါးထောက်ထားတတ်တဲ့ လူများကိုလည်း တွေ့ဘူးကြမှာပါ။ ဒီလို လူများကတော့ သူတို့နဲ့ စကားပြောနေသူများထက် အထက်စီးက ရှိကြောင်း ယုံကြည်နေသူများ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုလည်း ရှိသလို ငါမမှားဘူး၊ ငါမှန်တယ်ဆိုပြီး တွေးထင်နေတတ်တဲ့ အခါမှာ လူတွေဟာ ဒီလို ခါးထောက်တတ်ကြပါတယ်တဲ့။ ဒီလို အချိန်မှာ သူနဲ့ သွားပြီး မညင်းခုံတာ ကောင်းတာပေါ့နော်။
၆. တခါတလေမှာ ပုံနံပါတ်၆ထဲကလို လက်နောက်ပစ်နေတတ်တဲ့ လူမျိုးကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလို လူများကတော့ ငါ့အနားကို မလာနဲ့လို့ ပြောနေတာနဲ့ တူပါတယ်တဲ့။ ဒါပေမယ့် တချိန်လုံး လက်နောက်ပစ်နေတတ်တဲ့ အကျင့်က တကယ်တော့ သိပ်မကောင်းလှပါဘူးတဲ့။ ဒီလို လက်နောက်ပစ်နေခြင်းဟာ အထက်လူကြီးရဲ့ မောက်မာတယ်ဆိုတဲ့အထင်အမြင် လွဲမှား မှုကို ခံရတတ်ပါတယ်တဲ့။ သတိထားသင့်တဲ့ အပြုအမူလို့ မြင်ပါတယ်။
၇. စကားပြောနေရင်းနဲ့ ပုံနံပါတ် ၇ထဲကလို လက်နှစ်ဘက်ကို ယှက်ထားရင်း လက်မကို ထောင်ထားတတ်တဲ့ ပုံစံကတော့ သူနဲ့ စကားပြောနေသူကိုဘဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ စကားပြောနေတဲ့ အကြောင်းအရာကိုဘဲ ဖြစ်ဖြစ် အကောင်းဘက်က မြင်နေတယ်ဆိုတဲ့ သဘောမျိုးကို ဆောင်နေပါတယ်တဲ့။
၈. ပုံနံပါတ် ၈ မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အပြုအမူကတော့ ဒီလို သဘောကို ဆောင်ပါတယ်တဲ့။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှု အရမ်းပြင်းထန် နေတယ်ဆိုတာကို ဖော်ပြနေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။
၉. တဘက်လူဟာ ပုံနံပါတ် ၉ မှာ ဖော်ပြထားသလို လည်ပင်းကို တို့လိုက်ထိလိုက်၊ ဆွဲကြိုးကို ကိုင်လိုက်နဲ့ လုပ်တာကတော့ သူဟာ အဆင်မပြေမှုတစ်ခုခုကို ခံစားနေရတယ်ဆိုတာကို ဖော်ပြခြင်းပါတယ့်။ တဘက်လူကို သံသယ၀င်တာတို့ မကောင်းတာတစ်ခုခု ဖြစ်တော့မှာဘဲဆိုတဲ့ စိတ်မချတဲ့ စိတ်မတွေ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခါမှာ ဒီလို လုပ်တတ်ပါတယ်တဲ့။ ရုပ်ရှင် ဇာတ်လမ်းတွေထဲမှာ မင်းသမီးများက တခါတလေ တခုခု ဖြစ်တော့မယ်ထင်တဲ့ အခါမှာ ဒီလို လည်ပင်းကို တို့ထိတာမျိုးကို မြင်နိုင်ပါတယ်။
၁၀. ကိုယ်နဲ့ စကားပြောနေတဲ့လူဟာ ပုံနံပါတ် ၁၀ မှာ ပြထားသလို ခြေထောက်ကို ချိတ်ပြီး လှုပ်ရမ်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒါဟာ ကိုယ့်ကို သိပ်သဘောမကျဘူးဆိုတာကို ဖော်ပြနေတာပါဘဲ။ ကိုယ့်ကို သိပ်ပြီး စိတ်ထဲ မတွေ့ဘူးဆိုတာကို သိပြီဆိုရင်တော့ ရှောင်သင့်တဲ့ စကားတွေ အပြုမူတွေကို ရှောင်ပြီး ဆက်ဆံရင်တော့ ပိုကောင်းမှာပေ့ါနော်။
၁၁. ရပ်နေရင်းနဲ့ ပုံ ၁၁ ထဲကလို ခြေထောက်ချိတ်ထားတာကတော့ အခုအချိန်မှာ သူဟာ သက်တောင့်သက်သာရှိပြီး အပူအပင် မရှိဘူးဆိုတာကို ဖော်ပြတာပါတဲ့။
၁၂. ပုံနံပါတ် ၁၂မှာလို ရပ်နေရင်းကနေ ခြေဖျားလေးကို ကော့ထားတာကတော့ စိတ်အခြေအနေ ကောင်းနေတယ်ဆိုတာကို ဖော်ပြတာပါတဲ့။ စိတ်ကြည်လင်ပြီး ပျော်ရွှင်နေတဲ့ အခါမှာ လူတွေဟာ ဒီလို လုပ်တတ်ပါတယ်တဲ့။
နိုင်ငံတိုင်းမှာ မတူညီတဲ့ ယဉ်ကျေးမှု သဘာဝတွေရှိတာကြောင့် ယခု ဖော်ပြပေးလိုက်တဲ့ ခြေဟန်လက်ဟန်တွေရဲ့ ဆိုလိုချက်တွေဟာ တသွေမတိမ်း မတူညီတဲ့ အခါမျိုးတွေလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကောင်းမွန်တဲ့ ဆက်ဆံရေးကို ရရှိဘို့ လူတွေကို အကဲခတ်တဲ့ နေရာမှာတော့ အနည်းနဲ့ အများ အထောက်အကူ ပေးမယ်လို့ ထင်မြင်မိတဲ့ အတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Filed under လူ့စရိုက်, ရှောင်သင့်သော6ယောက်ပြောချင်ရာပြောသွားတယ်
လူတွေဟာ စကားကို လွယ်လွယ် ပြောတတ်လေ့ရှိပါတယ်။ ကိုယ်ပြောလိုက်တဲ့ စကားဟာ ဘယ်လို အဓိပ္ပါယ် ရှိတယ်၊ ဘယ်လို နောက်ဆက်တွဲတွေ ရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကို စဉ်းစားမနေဘဲ အလွယ်တကူ ပြောလေ့ပြောထရှိပါတယ်၊ အထူးသဖြင့် ကိုယ်ပြောတဲ့စကားကို နားမလည်ဘူးဆိုရင်တော့ ပိုပြီး လက်လွတ်စပါယ်နဲ့ စကားကို ပြောတတ်ကြပါတယ်။ သူဟာ ငါပြောတာကို နားမှ မလည်ဘဲဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ ထင်သလို လုပ်တတ်တာကတော့ လူ့သဘာဝပါဘဲ။ ဒါမျိုးအတွေ့အကြုံကို နိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့ သူများက အများဆုံး ကြုံတွေ့ဘူးကြလိမ့်မယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ ဒီကနေ့တော့ စကားကို မဆင်မခြင် ပြောမိမှုကြောင့် အားနာစရာ အဖြစ်အပျက်လေးတွေကို တွေ့ကြုံရပုံကို ဖော်ပြပေးသွားပါမယ်။
တခါတုန်းက ကျွန်မသူငယ်ချင်း တစ်ယောက်က သူ့အစ်မတစ်ယောက်ရဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် တစ်ခုကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ သူ့အစ်မက ဘန်ကောက်မှာ နေထိုင်နေပါတယ်တဲ့။ သူဟာလည်း နိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့ သူများလိုဘဲ ထိုင်းလူမျိုးများမသိတဲ့ မြန်မာဘာသာစကားနဲ့ အတင်းပြောတာတို့၊ ပြောင်တာတို့ နောက်တာတို့ကို လုပ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့။ တနေ့မှာတော့ မြို့ထဲမှာ လျှောက်သွားရင်း လူတစ်ယောက် မုန့်စားနေတာကို တွေ့ပါသတဲ့။ အဲဒီအခါမှာ မိန်းကလေးဟာ ခါတိုင်း နောက်နေ ပြောင်နေအတိုင်း ပြောင်နောက်ချင်လာတာနဲ့ အဲဒီမုန့်စားနေတဲ့လူကို ဒီလို နောက်လိုက်ပါတယ်တဲ့။ "ကျွေးပါအုံးလား၊ စားချင်လိုက်တာ" လို့ မြန်မာလို နောက်လိုက်ပါတယ်တဲ့။ အဲဒီအခါမှာ မုန့်စားနေတဲ့လူက ပြန်ပြောလိုက်တာကတော့ ဒီလိုပါ။ " ကျွေးပါ့မယ်၊စားပါအုံး " တဲ့။ အဲဒီလူလဲ မြန်မာလူမျိုး ဖြစ်နေတာပေါ့။ ဒီအခါမှ မိန်းကလေးလည်း အရမ်းအားနာပြီး တောင်းပန်ခဲ့ရပါတယ်တဲ့။ ဒါဟာလည်း စကားကို လက်လွတ်စပါယ် ပြောတတ်တဲ့ အကျင့် တစ်ခုရဲ့ ဥပမာတစ်ခုပါဘဲ။
နောက်ထပ် ကိစ္စ တစ်ခုကတော့ ကျွန်မရဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်လေးတစ်ခုပါ။ သိပ်မကြာသေးခင်က ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်လေး တစ်ခုပါ။ ကျွန်မနဲ့ ကျွန်မရဲ့ အခင်ဆုံး သူငယ်ချင်းဟာလည်း အထက်ပါ မိန်းကလေးလိုဘဲ ကျွန်မတို့ စကားကို နားမလည်တဲ့ ကိုရီးယားလူမျိုးများကို နောက်ပြောင်လေ့ရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကျွန်မသူငယ်ချင်းပေါ့။ ကျွန်မသူငယ်ချင်းက အစကတည်းက အနောက်အပြောင်သန်သူမို့ ကိုရီးယားလူမျိုးများကို သူတို့မသိတဲ့ မြန်မာစကားနဲ့ နောက်ပြောင်ရတာကို နှစ်ခြိုက်သူပါ။ ကျွန်မကတော့ အစကတည်းက စနောက်တာကို သိပ် မနှစ်သက်လို့ စနောက်လေ့မရှိပါဘူး။ ကျွန်မသူငယ်ချင်းကတော့ Taxi စီးရင်းလည်း Taxi Driver ကို စတယ်။ ဈေးဝယ်ရင် ဈေးသယ်ကို စတယ်။ ဒီလိုစတတ်တဲ့ အကျင့်က ကျွန်မဆီကိုလည်း အနည်းငယ်တော့ ကူးစက်လာပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ သိပ်မကြာသေးခင်က ကျွန်မတို့ နှစ်ယောက် မြန်မာပစ္စည်းအရောင်းဆိုင် တစ်ဆိုင်ကို သွားခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မကတော့ သုံးကြိမ်မြောက် သွားခြင်းမို့ အဲဒီ့ဆိုင်က ဆိုင်ပိုင်ရှင်နဲ့ လူတချို့ကို သိနေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မရဲ့ သူငယ်ချင်းကတော့ ခုမှ ဦးဆုံးမို့ ဘယ်သူက ဆိုင်ရှင်ဆိုတာတောင် မသိဘူးလေ။ အဲဒီ ဆိုင်ရှင်ဦးလေးက ဖြူဖြူ၀၀တုတ်တုတ်နဲ့ ကိုရီးယား တစ်ယောက်နဲ့ တော်တော်တူပါတယ်။ အဲဒီ ဦးလေးကြီးက ဒီဆိုင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်မသူငယ်ချင်းကို အရမ်းပြောပြချင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆိုင်ရှင်ဦးလေးကြီး ဆိုင်ထဲကို ၀င်လာခိုက်မှာ ကျွန်မက သူငယ်ချင်းကို သတိလက်လွတ်နဲ့ ပြောလိုက်မိပါတယ်။ " ဟဲ့... ခုဝင်လာတဲ့ ဦးလေးကြီးက ဆိုင်ရှင်ပေါ့ " လို့ ပြောလိုက်မိပါတယ်။ ကျွန်မသူငယ်ချင်းကတော့ ကျွန်မကို ဘာစကားမှ ပြန်မပြောဘဲ မျက်လုံးအပြူးသားနဲ့ ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မကတော့ သူသေချာ နားမလည်သောကြောင့် ကြောင်ကြည့်နေတယ် အထင်နှင့် ဆိုင်ထဲသို့ ၀င်လာတဲ့ ဆိုင်ရှင်ဦးလေးကြီးကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ တစ်ချိန်ထဲမှာ ဦးလေးကြီးနှင့် အတူ ၀င်လာတဲ့ လူအချို့ကိုလည်း လှမ်းမြင်လိုက်ရပါတယ်။ ဒီတော့ ကျွန်မသူငယ်ချင်း ကျွန်မကို ပြူးကြည့်နေတာ ဒါကြောင့်ဘဲနေမှာဟု ထင်ကာ နောက်ဆက်တွဲ စကားဖြင့် ဆိုင်ရှင်ဦးလေးကြီး ဘယ်သူဖြစ်ကြောင်းကို ရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။ " အဲဒီ ၀တုတ်ကြီးပေ့ါ " ဟူ၍ ...... အဲဒီ့ စကားပြောပြီးမှ ကျွန်မ အသိထဲ ၀င်လာတာ တစ်ခုကတော့ ဟိုက်... မြန်မာဆိုင်ပါလား!!! ကျွန်မ ချက်ချင်း ကျွန်မသူငယ်ချင်းကို လှမ်းကြည့်လိုက်မိတော့ သူက ကျွန်မကို အံ့သြောကြီးစွာ ငေးကြည့်ရင်း ပါးစပ်အဟောင်းသားနဲ့ ကြည့်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ကျွန်မ တချိန်တည်းမှာဘဲ ဆိုင်ရှင်ဦးလေးကြီးကို လှမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်။ ဦးလေးကြီးကို ကြည့်ရတာတော့ သိဟန်မပေါ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မတို့ ဘေးမှာ ငွေရှင်းပေးနေတဲ့ အကိုကြီးကတော့ ကောင်းကောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးကို ကြားလိုက်မှာ အသေအချာပါဘဲ။ ကျွန်မလည်း အားနာလွန်းလို့ မျက်နှာကို ဘယ်ထားရမှန်းတောင် မသိပါဘူး။ ကျွန်မတို့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် အမြဲ အတင်းတုတ်နေကျမို့ မြန်မာဆိုင်ဆိုတဲ့ အသိပျောက်ပြီး သတိလက်လွတ် ပြောမိတာပါ။ ကျွန်မတို့ နှစ်ယောက်လည်း ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ ကြောင်နေပြီးမှ ဆိုင်ထဲမှ ထွက်လာခဲ့မိပါတယ်။ ဆိုင်ရှင်ဦးလေးကို နှုတ်တောင်မဆက်မိခဲ့ပါဘူး။
အဲဒီ့နေ့က ကျွန်မသိလိုက်ရတာကတော့ စကားကို လက်လွတ်စပါယ် ပြောတတ်တဲ့အကျင့်က ဒီလို အားနာစရာကောင်းတဲ့ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကို သယ်ဆောင်လာတယ်ဆိုတာပါဘဲ။ ကျွန်မ ကြိုးစားပြီး ပြင်ဆင်ဘို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီ။ ကိုယ်ပြောတဲ့ စကားကို နားလည်သည် ဖြစ်စေ နားမလည်သည် ဖြစ်စေ ဘယ်တော့မှ လက်လွတ်စပါယ် မပြောမိဘို့ကိုပါ။ ကျွန်မအတွက်တော့ မေ့မရတဲ့ သင်ခန်းစာ တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ရပါပြီ။ ကျွန်မလို အဖြစ်မျိုးနဲ့ မကြုံစေဘို့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Filed under လူ့စရိုက်, ရှောင်သင့်သော4ယောက်ပြောချင်ရာပြောသွားတယ်
Psycho test (2)
ကျွန်မကတော့ psycho test လုပ်ရတာကို အရမ်းဝါသနာပါသူမို့ အမြဲတမ်း ရှာဖွေပြီး စမ်းသပ်နေတတ်ပါတယ်.. ကိုရီးယားမှာတော့ ဒီ psycho test တွေဟာ အမျိုးစုံ ရှိပါတယ်... psycho test ဟာ ဗေဒင် မဟုတ်ပါဘူး.. စိတ်အပန်းဖြေနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းလေး တစ်ခုပါ.. တခါလောက် အပျော်သဘောနဲ့ စမ်းသပ်ကြည့်နိုင်ဘို့ ဒုတိယ အကြိမ် psycho test ကို တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်... ဒီတခါတော့ ရောင်စုံနေတဲ့ ပုံလေးတွေကို ကြည့်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ အကျင့်လေးတွေကို ခန်းမှန်းကြည့်နိုင်တဲ့ psycho test တစ်ခုကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်... တစ်ခေါက်လောက်တော့ စမ်းကြည့်ကြပါဦးနော်...
အပေါ်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ပုံ ကိုးပုံကို ကြည့်ပြီး အနှစ်သက်ဆုံးပုံလေးတစ်ပုံကို ရွေးကြည့်ပါ... နှစ်သက်တဲ့ ပုံလေးမရှိဘူးဆိုရင်လည်း ဒီပုံလေးကို ပထမဆုံး ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ မျက်စိထဲကို တန်းဝင်သွားတဲ့ ပုံလေး တစ်ပုံကို ရွေးပါ...ရွေးပြီးရင် သက်ဆိုင်ရာ အဖြေကို အောက်ဘက်မှာ ရှာကြည့်နိုင်ပါတယ်... ဒီစမ်းသပ်ချက်လေးကတော့ တော်တော်မှန်တယ်လို့ ပြောကြပါတယ်..စိတ်အပန်းဖြေဖို့ တစ်ခေါက်လောက် စမ်းသပ်ကြည့်ပါ...
၁. ၁ပုံလေးကို ရွေးချယ်သူများကတော့ ကိုယ်တိုင်ရဲ့ အတွေးကို သိုသိုသိပ်သိပ်နေတတ်သော၊ စိတ်ခံစားလွယ်သော၊ ချိုသာသော စိတ်ထားကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူများဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ ၁ပုံလေးကို ရွေးချယ်သူများကတော့ ကိုယ်ကိုတိုင်ရော ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ သူများတွေထက်ပိုပြီး စိတ်သောကရောက်တတ် စိတ်ပင်ပန်းတတ်သူပါတဲ့။ သူများတွေနဲ့ ရောရောနှောနှော နေရတာကို မနှစ်သက်လို့ သူများတွေနဲ့ အလာပသလာပ ပြောတာထက် တစ်ယောက်တည်း နေရတာကို နှစ်သက်ပါတယ်တဲ့။ ဒါ့အပြင် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့ အခါမှာလဲ အမြဲတမ်း အလေးထား ဆက်ဆံတတ်တာမို့ သူငယ်ချင်းများရဲ့ စိတ်ချယုံကြည်မှုကို ရရှိနိုင်ပါတယ်တဲ့။ သင်က တစ်ယောက်တည်း နေရတာကို နှစ်သက်လို့ ဘယ်လောက်ဘဲ တစ်ယောက်တည်း နေနေ ဘယ်တော့မှ တစ်ယောက်တည်းနေရတာကို ပျင်းရိညည်းငွေ့တယ်လို့ ဘယ်တော့မှ မထင်တဲ့ စရိုက်လက္ခဏာကို ပိုင်ဆိုင်သူများပါတဲ့။
၂. ၂ပုံလေးကို ရွေးချယ်သူများကတော့ လွတ်လပ်မှုကို နှစ်သက်တတ်သော၊ ချုပ်ချယ်မှုကို မနှစ်သက်သော၊ သူတပါးကို တွယ်ဖက်မနေတတ်သောသူများဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ ၂ပုံလေးကို ရွေးချယ်သူများကတော့ ကိုယ်ကိုတိုင်ရဲ့ ဘ၀ခရီးလမ်းကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် အနှောင်အဖွဲ့ကင်းကင်းနဲ့ ရွေးချယ်ချင်သူများဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ ဒီ့အပြင် အလုပ်ခွင်ထဲမှာအပြင် အားလပ်ချိန်ကို အသုံးချတဲ့အခါမှာလည်းကောင်း နေရာတိုင်းမှာ အနုပညာဆန်ဆန် လုပ်ကိုင်တတ်သူများ ဖြစ်ကြပါတယ်။ လွတ်လပ်မှုကို အလွန်နှစ်သက်တဲ့ အတွက် တခါတလေမှာတော့ သင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှ လူများရဲ့ သဘောထားနဲ့ လုံးဝဆန့်ကျင်တဲ့ အလုပ်များကိုလည်း လုပ်ကိုင်တတ်ပါတယ်တဲ့။ သင်ကိုယ်တိုင်ကတော့ ကိုယ်ပိုင် အတွေးအခေါ်တွေနဲ့ ပြင်းထန်နေတဲ့ အတွက် ဘယ်တော့မှ သူများလုပ်တိုင်း လိုက်လုပ်လေ့မရှိဘဲ ကိုယ်ပိုင် စတိုင်လ်နဲ့ကိုယ်နေတတ်သူများပါတဲ့။
၃. ၃ပုံလေးကို ရွေးချယ်သူများကတော့ တက်ကြွရွှင်လန်းသော၊ သွက်လက်ဖျတ်လတ်သော၊ ပွင့်လင်းသောသူများ ဖြစ်ကြပါတယ်တဲ့။ ဒါ့အပြင် နှစ်သက်ပြီး စိတ်ဝင်စားတဲ့ အလုပ်ဆိုရင် အန္တရာယ်ရှိတဲ့ အလုပ်ဖြစ်နေရင်တောင် ကြောက်ရွံ့မှု နည်းနည်းလေးမှ မရှိဘဲ လုပ်တတ်တဲ့လူများလည်း ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ ဒီ့အပြင် ဘယ်အလုပ်ကိုမဆို ခေါင်းဆောင်လုပ်ကိုင်ရတာကို နှစ်သက်သူများလည်း ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ ဒီလို ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်တိုင်း သင့်ရဲ့ တက်တက်ကြွကြွ ဦးဆောင်တတ်တဲ့ စရိုက်လက္ခဏာက ပိုပြီး လင်းလက် တောက်ပြောင်ပါတယ်တဲ့။
၄. ၄ပုံလေးကို ရွေးချယ်သူများကတော့ လက်တွေ့ဆန်သော၊ လူတကာနဲ့ သင့်တင့်မျှတအောင်နေတတ်သော၊ ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သော သူများဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ သင်ကတော့ စိတ်ကူးယဉ်နေတာထက် လက်တွေ့ကျတဲ့ ဘ၀ကို အလေးထားသူများ ဖြစ်သလို အချစ်မှာလည်း ရှုတ်ရှုတ်ထွေးထွေးကို မနှစ်သက်ဘဲ သာမန် လူမျိုးကိုသာ ချစ်ချင်ပါတယ်တဲ့။ ပြဿနာအားလုံးကိုလည်း လက်တွေ့ကျကျဘဲ ဆင်းစားတတ်တဲ့ လူများဖြစ်ကြပါတယ်။ သင့်ကြောင့်မလို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှ လူတွေက လက်တွေ့ဆန်ခြင်းနဲ့ လွတ်လပ်မှုကို ခံစားသိရှိနိုင်ပါတယ်တဲ့။ ဒီ့အပြင် သင့်ကို သင့် ပတ်ဝန်းကျင်က ကြင်နာနွေးထွေးတတ်သူလို့ အသိအမှတ်ပြုတာကိုလည်း ခံရသူပါတဲ့။ တောက်ပလွန်းတဲ့ အပြင်အဆင်တို့ ခေတ်ဆန်လွန်းတာတို့ကို မနှစ်သက်လို့ အမြဲတမ်း သန့်ပျံ့သန့်ရှင်ပြီး ကျက်သရေရှိတဲ့ အ၀တ်အစားကိုဘဲ ၀တ်စားတတ်သူများလည်း ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။
၅. ၅ပုံလေးကို ရွေးချယ်သူများကတော့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကျကျ ဆောင်ရွက်တတ်သူ၊ ကိုယ့်ကိုကို ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိသူ၊ အရာအားလုံးကို အသုံးကျကျ အသုံးချတတ်သူများ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ကတော့ အားလုံးထက် ကိုယ့်ကိုကို ယုံကြည်သူ ဖြစ်ပြီး အမှတ်တမဲ့ ကြုံတွေ့လာတဲ့ ကံကောင်းမှုထက် ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးလို့ ရရှိတဲ့ ကံကောင်းမှုကို ပိုမို ယုံကြည်တတ်သူပါ။ သင်ကတော့ ကြုံတွေ့လာတဲ့ အခက်အခဲအားလုံးကို လက်တွေ့ကျကျ လွယ်ကူရှင်းလင်းတဲ့ နည်းလမ်းတွေနဲ့ ဖြေရှင်းတတ်ပါတယ်တဲ့။ လက်တွေ့ဘ၀မှာလည်း အမြဲတမ်း တန်ဖိုးရှိရှိနေထိုင်တတ်သူပါ။ ဒီလို အကြောင်းတွေကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေက သင့်ကို မှီခိုအားကိုးလောက်တဲ့လူလို့ သတ်မှတ်ကြပါသတဲ့။ အဲဒီလို အသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရလို့လည်း ပိုပြီး ကြိုးစားလုပ်ရမယ့် တာဝန်တွေ ပိုများလာတတ်ပါတယ်တဲ့။ သင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှ လူတွေက သင့်ကို ကိုယ့်ကိုကို အရမ်းယုံကြည်တတ်သူရယ်လို့ ပြောကြတဲ့ အခါလည်း ရှိပါတယ်တဲ့။ သင်ဟာ အလုပ်တစ်ခု သင်တွေးထားသလို ဖြစ်မလာခင်အထိတော့ ကိုယ့်ကိုကို ကျေနပ်နှစ်သိမ့်မှု မရှိပါဘူးတဲ့။
၆. ၆ပုံလေးကို ရွေးချယ်သူများကတော့ နွေးထွေးတဲ့ အသည်းနှလုံးပိုင်ရှင်ဖြစ်ပြီး အလေးအနက်ထားပြီး ဆောင်ရွက်တတ်တဲ့ စရိုက်လက္ခဏာကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူမျာ ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ ဒီပုံလေးကို ရွေးချယ်သူများကတော့ အလုပ်တိုင်းကို နူးညံ့သိမ်မွေ့စွာ လုပ်ကိုင်တတ်ပါတယ်တဲ့။ လူမှုဆက်ဆံရေးလည်း ကောင်းမွန်သလို လွတ်လပ်မှုကို လိုလားသူများ ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ သင်ဟာ ဘ၀မှာ ခြေလှမ်း တစ်ချက် နောက်ကျလို့ ဘ၀ရဲ့ခါးသီးမှုကို ခံစားရရင်လည်း ပျော်ပျော်နဲ့ဘဲ အဲဒီ ခါးသီးမှုကို လက်ခံနိုင်သူပါတဲ့။ သင်ဟာ ဘ၀ရဲ့လွတ်လပ်မှုရဘို့အတွက် သင်တစ်ယောက်တည်း နေနိုင်ဘို့ကို ကြိုးစားတတ်ပေမယ့် အထီးကျန်ဆန်တဲ့ လူမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ သင်ဟာ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ဘ၀ကို လိုလားပြီး သင့်ကို ပေးလာတဲ့ ကံကြမ္မာကိုလဲ ကျေကျေနပ်နပ်နဲ့ လက်ခံတတ်သူပါ။ မိမိရဲ့ လက်ရှိဘ၀ကိုလည်း သဘောကျနှစ်သက်နေတတ်ပါတယ်တဲ့။
၇. ၇ပုံလေးကို ရွေးချယ်သူများကတော့ အကောင်းမြင် ၀ါဒီသမားများ၊ အပျော်အပါးကို ခုံမင်သူများ၊ ပွင့်လင်းတက်ကြွသူများ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ကတော့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကြုံသလို နေရတာကို နှစ်သက်သူအမျိုးအစားထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဘ၀ဟာ တစ်ခါဘဲ ရှိလို့ ပျော်ပျော်နေရမယ်လို့ သတ်မှတ်တတ်သူပီပီ ပျော်ပျော်နေတတ်သူပါ။ သိချင်စိတ်ပျင်းပြသူများ ဖြစ်လို့ အသစ်ဆိုတာနဲ့ စမ်းသပ် လုပ်ကိုင်ချင်တော့တာပါဘဲ။ ပျင်းစရာကောင်းတဲ့ အလုပ်ကိုတော့ အမုန်းဆုံးပါတဲ့။ ဒါကြောင့်မို့ သင်ဟာ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိရှိသမျှ အတွေ့အကြုံမှန်သမျှကို စမ်းသပ်ကြည့်ပြီး အဲဒီလို လုပ်ရတာကိုလည်း နှစ်သက်ခုန်မင်နေတတ်ပါတယ်တဲ့။
၈. ၈ပုံလေးကို ရွေးချယ်သူများကတော့ ခံစားချက်ပြင်းထန်သော၊ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်သော၊ Romanticဆန်သော သူများ ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ သင်ကတော့ ခံစားချက်ပြင်းထန်ပြီး ခံစားလွယ်တတ်တဲ့ လူမျိုးပါ။ သင်ကတော့ အရာအားလုံးကို သွေးအေးအေး လက်တွေ့ကျကျ စဉ်းစား ဆုံးဖြတ်ရတာမျိုးကို မနှစ်သက်ဘဲ ကိုယ်ခံစားရတဲ့အတိုင်း ကိုယ့်ရဲ့ ခံစားချက်စေရာကို လုပ်ကိုင်တတ်သူများ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဟာ အသက်ရှင်သန်နေသမျှကာလပတ်လုံး စိတ်ကူးယဉ်အိမ်မက် ပျောက်မသွားဘို့ကို အလေးထား စဉ်းစားတတ်သူဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ ပြီးတော့ သင်ဟာ ခံစားချက်ကို ဘေးဖယ်ပြီး ဦးနှောက်ကို ဦးစားပေး စဉ်းစားတတ်တဲ့လူမျိုးကို မနှစ်သက်ပါဘူးတဲ့။
၉. ၉ပုံလေးကို ရွေးချယ်သူများကတော့ သေချာ စဉ်းစားပိုင်ဖြတ်နိုင်သော၊ ကိုယ့်ကိုကို ယုံကြည်ပိုင်နိုင်မှုရှိသော၊ ယုံကြည်စဖွယ်ကောင်းသောသူများ ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ သင့်ရဲ့ စိတ်ဆန္ဒအားလုံးဟာ တန်ဖိုးရှိတဲ့ တစ်ခုခုကို အမြဲတမ်း တမ်းတနေတတ်ပါတယ်။ သင်ဟာ လူတကာက သိပ်စိတ်မ၀င်စားတဲ့ တစ်ယောက်ထဲ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ကမ္ဘာလေးမှာ နေထိုင်ရတာကို နှစ်သက်တတ်ပါတယ်တဲ့။ ဒါ့အပြင် သူများနဲ့မတူ တမူထူးခြားတဲ့ ပုံစံမျိုး၊ အတွေးအခေးမျိုးနဲ့ ဘ၀ကို လျှောက်လှမ်းနေသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ သင်ဟာ အပြောင်းအလဲများတဲ့ ခေတ်ရေစီးချောင်းကို စိတ်မ၀င်စားဘဲ မူပိုင်ဟန်နဲ့နေထိုင်တတ်သူပါ။ ချစ်ရသူကိုလည်း ယဉ်ကျေးမှုအဆင့်အတန်းဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကို ကြည့်ပြီး ရွေးချယ်လေ့ရှိပါတယ်တဲ့။
ဒီတခါ ကျွန်တော်နဲ့ ကျွန်မတို့ ဖော်ပြပေးတဲ့ စိတ်ပညာဆိုင်ရာ ကစားနည်းလေးကို ပျော်ရွှင်စွာ ကစားရင်း အပန်းဖြေနိုင်ကြပါစေ။
Filed under psycho test, လူ့စရိုက်9ယောက်ပြောချင်ရာပြောသွားတယ်
ဒီကနေ့တော့ အားလုံးစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ ရှောင်သင့်သော မိန်းကလေးများအကြောင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်..
၁. ကော်ဖီ ဒါမှမဟုတ် လက်ဘက်ရည်ကို အရမ်းကို ကောင်းကောင်း ဖျော်တတ်သောမိန်းမ
၂. သစ်သီးဝလံများကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် ခွာတတ် သင်တတ်သောမိန်းမ
၃. အရက်အမျိုးအစားများ၊ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံခြား အရက်အမျိုးအစားများကို ကောင်းကောင်း သိနေသော မိန်းမ
၄. ဖုန်း အလွန်အမင်းဆက်တတ်သော မိန်းမ
၅. အဝေးပြေးကားလမ်းများမှာ ရှိတဲ့ ကားရပ်နားစခန်းတွေကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် သိနေတတ်သော မိန်းမ
၆. မီးရပ်သားဖွားဆေးခန်းကို မြင်တာနဲ့ ချက်ချင်း ခေါင်းငိုက်စိုက်ချပြီး နေတတ်သော မိန်းမများ
ဒီလို မိန်းမများကတော့ လက်ထက်တဲ့ အခါမှာ ရှောင်သင့်သောမိန်းမများလို့ ဖတ်ရှုခဲ့ရပါတယ်... အချက်အားလုံးကိုတော့ သဘောမတူပေမယ့် အားလုံးနဲ့မျှဝေခံစားနိုင်ရန် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်... အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် နှောင့်နှေးခဲ့ရတဲ့ ပို့စ်များကို ဆက်လက် တင်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်...
Filed under လူ့စရိုက်, ရှောင်သင့်သော5ယောက်ပြောချင်ရာပြောသွားတယ်
ဒီကနေ့တော့ ရှောင်ကျဉ်သင့်သော ယောင်္ကျားများ အကြောင်းကိုတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်....
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ အချစ်တစ်ခုကို တည်ဆောက်ဘို့ အချို့ချို့သော အချက်များလိုအပ်ပါတယ်... အဲဒီ အချက်တွေထဲက တစ်ချက်ကတော့ ကိုယ့်အပေါ်မှာ အရမ်းချစ်ပြီး အရမ်းနားလည်ပေးတတ်တဲ့ အဖော်မွန်နဲ့ တွေ့မိဘို့လည်း အပါအ၀င်ပါဘဲ... ပျော်စရာကောင်းတဲ့ အချစ်တစ်ခုကို တည်ဆောက်ဘို့ ကိုယ့်ဘက်က ဘယ်လောက်ဘဲ ကြိုးစားကြိုးစား ကိုယ့်ရဲ့ လက်တွဲဖော်က မကောင်းဘူးဆိုရင်တော့ အဲဒီ ကြိုးစားမှုတွေက သဲထဲရေသွန်ဖြစ်ပြီပေါ့... ဒါကြောင့် ဒီနေ့တော့ မိန်းကလေးတို့ ချစ်သူ ရွေးချယ်တဲ့ အခါ သတိထားသင့်တဲ့ ယောင်္ကျားများ အကြောင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်... မိန်းကလေးများ အတွက်လို့ ဆိုပေမယ့် ယောင်္ကျားလေးများလည်း ဖတ်ရှုနိုင်တဲ့ စာဖြစ်ပါတယ်...
ကိုယ့်ချစ်သူ အတွက် တကယ် အားကိုးထိုက်တဲ့ သူတယောက် ဖြစ်အောင် ရှောင်ကျဉ်သင့်တာကို ရှောင်နိုင်ရန် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်
1. ငါ့ကို မယုံလို့လား
တခါတလေ မသင်ကာစရာ ကိစ္စလေးရှိလို့ နည်းနည်းမေးမိတာနဲ့ ဘာလဲ ငါ့ကို မယုံလို့လားဆိုပြီး ပြန်မေးခွန်းထုတ်တတ်တဲ့ ယောင်္ကျား အချို့ရှိပါတယ်... ချစ်သူမိန်းကလေးက ကိုယ့်ကို မယုံကြည်နိုင်လို့ မေးမြန်းနေတာကို ရှင်းပြဘို့ နေနေသာသာ ကိုယ့်ချစ်သူကို ပြန်ပြီး အော်ငေါက်ချင်တတ်တဲ့ ယောင်္ကျားမျိုး.... သူ့ကိုယုံကြည်ဘို့ကို အတင်းအကျပ်လုပ်ယူချင်တဲ့ ယောင်္ကျားမျိုးကတော့ လုံးဝ ယုံကြည်လို့ မရတဲ့ ယောင်္ကျားမျိုးထဲမှာ ပါတတ်ပါတယ်တဲ့... ဒီလိုလူမျိုးကို ယုံကြည်မိလို့ကတော့ နောက်နောင်မှာ ဒီထက်ဆိုးတဲ့ အဖြစ်မျိုးတွေနဲ့ ကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်တဲ့...
2. ချစ်သူမိန်းကလေးကို အမြဲတမ်း အားကိုးယုံကြည်တယ်လို့ပြောတတ်သူ
အချို့ယောင်္ကျားများက မိမိရဲ့ ချစ်သူမိန်းကလေးကို နင်နဲ့ တူတူရှိနေရင် စိတ်သက်သာရာရပြီး လွတ်လပ်မှုကို ခံစားရတယ်လို့ ပြောတတ်ကြပါတယ်... ဒီလို စကားကို အပြောခံရတဲ့ မိန်းကလေးတွေကတော့ သူတို့ရဲ့ ချစ်သူဟာ သူတို့မရှိရင် မနေနိုင်သူပါလားဆိုပြီး အထင်မှတ်တတ်ပါတယ်... ဒါပေမယ့် ဒါဟာ တကယ့်ကို အထင်သတ်သတ်ပါဘဲ... လက်တွေမှာတော့ အဲဒီလို ပြောတတ်ကြတဲ့ ယောင်္ကျားများက သူတို့ အမှားလုပ်ရင်လည်း ချစ်သူဖြစ်သူက ခွင့်လွှတ်နားလည်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အသိနဲ့ အမြဲတမ်း ကိုယ်ထင်ရာကိုသာ လုပ်တတ်တဲ့ တကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့ ယောင်္ကျားများဖြစ်တတ်ပါသတဲ့... ဒီ့အပြင် သူများပြောတာကိုလည်း နားယောင်တတ်တဲ့ ယောင်္ကျားမျိုး ဖြစ်တတ်ပါသတဲ့... ကလေးငယ်တစ်ယောက်ကို လူကြီးဖြစ်အောင် ပြုစုပြိုးထောင်ပေးတဲ့ စိတ်နဲ့ မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ စောစောစီးစီး လမ်းခွဲတာ ကောင်းပါသတဲ့...
3. 'ငါ' စွဲကြီးသူ
ကိုယ့်ကိုကိုသာ စိတ်ဝင်စားတတ်တဲ့ ယောင်္ကျားမျိုးဟာလည်း ရှောင်သင့်တဲ့ ယောင်္ကျားမျိုးထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်တဲ့... ဒီလိုလူများကတော့ စကားနည်းနည်း ပြောကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်တဲ့... သူများအကြောင်းဆိုရင် နားမထောင်ချင်ဘဲ သူ့အကြောင်းကိုသာ မပြတ်ပြောလိုသူများဖြစ်ပါတယ်တဲ့... အဲဒီလိုယောင်္ကျားမျိုးနဲ့ ချစ်ကြိုက်မိတယ်ဆိုရင်တော့ အမြဲတမ်း သူ့အကြောင်းဘဲ နားထောင်နေရမှာပါတဲ့... သတိထား ရှောင်ကြဘို့တော့ လိုမယ်နော်
4. အဲဒီလို မစားနဲ့...အဲဒီလို မထိုင်နဲ့... အဲဒီလို ...အဲဒီလို...
ဒီလိုဘဲ သိပ်ပြီး ရေးကြီးခွင်ကျယ် မဟုတ်တဲ့ ကိစ္စတွေကအစ အဆက်မပြတ်ကိုဘဲ ပွစိပွစိပြောတတ်သူပါ... အဲဒီလိုလူမျိုးကတော့ တော်တော်လေးကို ရှေးဆန်ပြီး တယူသန် သမားတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်.... ဒီလိုလူမျိုးကတော့ ကိုယ့်အယူအဆကလွဲပြီး ဘယ်သူ့ အတွေးအခေါ်ကိုမှ အသိအမှတ်ပြု လက်ခံသူများ မဟုတ်ပါဘူးတဲ့... ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ အချစ်တစ်ခုကို တည်ဆောက်ဘို့ လိုအပ်တဲ့ အချက်တွေ တစ်ချက်မှ မရှိတဲ့ လူမျိုးပါဘဲ... ဒီလိုလူမျိုးကို ချစ်ဘို့လည်း နည်းနည်း စဉ်းစားဘို့တော့ လိုလိမ့်မယ်နော်....
ဒီစာကို ဖတ်မိတဲ့ အမျိုးသမီး မမများကတော့ တစ်ယောက်ယောက်ကို ချစ်တော့မယ်ဆိုရင် ဒီ အချက်လေးများကို သတိရပြီး စဉ်းစားဆုံးဖြတ်နိုင်ပါစေ... ဒီစာကို ဖတ်မိတဲ့ အမျိုးသားများကတော့ ကိုယ်ကိုတိုင်ဟာ ဒီလို ယောင်္ကျား အမျိုးအစားတွေထဲမှာ ပါဝင်နေရင်တောင် မိမိရဲ့ အကျင့်လေးများကို ပြုပြင်နိုင်ပါစေ... ဒီလို ယောင်္ကျား အမျိုးအစားတွေထဲမှာ မပါဘူးဆိုရင်လည်း နောက်နောင် ဒီလို မဖြစ်အောင် ကြိုတင် ဆင်ခြင်နိုင်ရန် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်....
နောက်နေ့တွေမှာလည်း ဒီ့ထက် ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ စာများကို ဖော်ပြပေးအုံးမှာမို့ စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုပေးပါရန်....
အေဘီသွေးပိုင်ရှင်များရဲ့ ထူးခြားချက်ကတော့ ဒီလို ဖြစ်ပါတယ်... အေဘီသွေးပိုင်ရှင်များဟာ သိပ်ပြီး မထူးခြားလှတဲ့ စရိုက်သဘာဝကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်တဲ့...
မိဘကို ဆိုးတာမျိုးလည်း မရှိတဲ့ အေဘီသွေးပိုင်ရှင်များက အရာအားလုံးကို ကွက်ကျော်မြင်တတ်လို့ အဆူခံရတာမျိုးလည်း လုံးဝ မရှိသလောက်ပါတဲ့... ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဘာတွေဖြစ်နေတယ် ဆိုတာကို လျင်လျင်မြန်မြန် အကဲခတ်နိုင်စွမ်းရှိသူများလည်း ဖြစ်ပါတယ်... ဒါကြောင့်မို့ ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေက အေဘီသွေးပိုင်ရှင်များကို စကားနည်းပြီး ဘုကျကျနိုင်လိုက်တာလို့ အပြောခံရတာမျိုးလည်း ကြုံရတတ်ပါတယ်... ဒါပေမယ့် ကြီးပြင်းလာတာနဲ့ အမျှ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ လိုက်လျောညီထွေအောင် နေတတ်လာပြီး လူမှုဆက်ဆံရေးလည်း ကောင်းမွန်ပြေပြစ်လာပါတယ်တဲ့... အစပိုင်းမှာတော့ အလုပ်တစ်ခုကို ကြာရှည်လုပ်နိုင်တဲ့ ဇွဲ နည်းပါးတာကြောင့် အလုပ်တစ်ခုကို လုပ်တဲ့ အခါမှာ မြန်မြန် ပင်ပန်းအားလျော့ လွယ်ပါတယ်တဲ့... ဒါပေမယ့်လည်း ၀ီရိယစိုက်ပြီး ကြိုးစားနေတဲ့ ကိုယ်ကိုတိုင်ရဲ့ ပုံစံကို နှစ်သက်သူများ ဖြစ်လို့ ဘယ်အရာကိုမဆို လုပ်လိုစိတ် ပြင်းထန်ပြီး ကြိုးကြိုးစားစား တက်တက်ကြွကြွနဲ့ လုပ်ဆောင်တတ်ပါတယ်တဲ့... လူတွေနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့ အခါမှာလည်း အပြောအဆိုကို အတတ်နိုင်ဆုံး သတိထားတတ်ပြီး လုပ်ငန်းခွင်မှဆိုရင်လည်း အမှားမလုပ်မိအောင် သတိထား လုပ်ကိုင်တတ်သူများ ဖြစ်ပါတယ်... လူတစ်ယောက်နဲ့ တော်တော်လေး ရင်းနှီးလာတာတောင်မှ အဲဒီလူနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ကြားမှာ အတားအဆီး တစ်ခုကို ထားပြီးဆက်ဆံတတ်သူများလည်းဖြစ်ပါတယ်... ဒါကတော့ သူတပါးအပေါ်မှာ အမှားလုပ်မိမှာကို စိုးရိမ်တတ်တဲ့ အေဘီသွေးပိုင်ရှင်များရဲ့ အသေးစိတ်လှတဲ့ အတွေများကြောင့်ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်... ဒါ့ပြင် အေဘီသွေးပိုင်ရှင်များဟာ တစ်ယောက်တည်းကိုဘဲ ခင်တတ်တဲ့ အကျင့်လည်းမရှိပါဘူးတဲ့... အလုပ်အများကြီးကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းရှိသူများ ဖြစ်သလို အရာအားလုံးကို လက်တွေ့ကျကျ တွေးခေါ်ဆင်ချင်တတ်သူများလည်း ဖြစ်ပါတယ်... အလုပ်တစ်ခုကို လုပ်တဲ့အခါမှာလည်း ထောင့်ပေါင်းစုံကနေ တွေးခေါ်ဆင်ချင်တတ်သူများ ဖြစ်ပါတယ်တဲ့... မိဘဆွေမျိုး သူငယ်ချင်းရယ်ဆိုပြီး သီးသန့် မခွဲခြားတတ်ဘဲ လူသားအားလုံးကို တန်းတူညီတူ ဆက်ဆံတတ်သူများလည်း ဖြစ်ပါတယ်... ဒါပေမယ့် တဘက်မှာလည်း အမြဲတမ်း ငွေရေးကြေးရေးကို စိတ်ပူနေတာကြောင့် ပိုက်ဆံရှာနိုင်မယ့် အခြေအနေများကို အပူတပြင်း ရှာဖွေနေတတ်ပါတယ်တဲ့... အေဘီသွေးပိုင်ရှင်များက ကိုယ့်ရဲ့ ခံစားချက်ကို မျက်နှာမှာ မဖော်ပြတတ်သူများ ဖြစ်သလို တော်ရုံတန်ရုံနဲ့ ဒေါသလည်း မထွက်တတ်ပါဘူးတဲ့... ကိုယ့်ကို သစ္စာဖောက်သွားတဲ့သူကိုတော့ သေချာ မှတ်ထားပြီး ကလဲ့စားခြေတတ်တဲ့ စရိုက်သဘာဝကို ပိုင်ဆိုင်သူများ ဖြစ်ပါတယ်... တခါတလေတော့ နူးညံ့တဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားကို အေဘီသွေးပိုင်ရှင်များရဲ့ မျက်နှာမှာ မြင်နိုင်သလို တခါတလေမှာတော့ ခက်ထန်မှုတွေကိုသာ မြင်ရတတ်ပါတယ်.... ဒါတွေအားလုံးကတော့ အေဘီသွေးပိုင်ရှင်များ အကြောင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်...
ဆက်လက်ပြီး စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ အကြောင်းများကို တင်ပြပေးသွားပါဦးမယ်....
Filed under လူ့စရိုက်2ယောက်ပြောချင်ရာပြောသွားတယ်
ဒီတစ်ခါ အိုသွေးပိုင်ရှင်များ အကြောင်း တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်... အိုသွေးပိုင်ရှင်များကတော့ စရိုက်သဘာဝက ထူးခြားပါတယ်...
အိုသွေးပိုင်ရှင်များကတော့ အိမ်မှာတော့ ပြဿနာရှာတတ်ကြပေမယ့် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆိုရင်တော့ သူငယ်ချင်းတွေကို ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်တတ်ပြီး လူတကာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေအောင် နေတတ်သူများဖြစ်ကြပါတယ်... အရာအားလုံးကို တက်တက်ကြွကြွနဲ့ ပါဝင်ဆောင်ရွက်တတ်သူများ ဖြစ်ကြပါတယ်... အလုပ်အားလုံးကိုလည်း ကိုယ့်အလုပ်လို့ သတ်မှတ်ပြီး ကြိုးကြိုးစားစား ဆောင်ရွက်တတ်ကြသူများ ဖြစ်ပါတယ်... လုပ်ငန်းခွင်ကို ရောက်ပြီဆိုရင်လည်း သူတပါးကို စာနာထောက်ထားတတ်ကြပါသတဲ့... အနာဂတ်အတွက် ရည်မှန်းချက် တစ်ခု ရှိပြီဆိုရင် တစိုက်မတ်မတ်နဲ့ လုပ်ကိုင်တတ်ပေမယ့် မျှော်လင့်ချက် မရှိဘူးလို့ ထင်မိပြီဆိုရင်တော့ အစွဲအလမ်း တစ်ခုမှမထားဘဲ လက်လျှော့ပစ်တဲ့ အကျင့်လေးများလည်း ရှိပါတယ်တဲ့... အလုပ်တစ်ခုကို လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်း မြင့်မားသလို အခြေအနေ အလိုက် စိတ်စုစည်းမှုလည်း ကောင်းမွန်ပါသတဲ့... ရလဒ်ကိုဘဲ ဦးစားပေးသူများလို့လည်း ဆိုနိုင်ပါသတဲ့... အလုပ်တစ်ခုကို လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် plan အရင်ချပြီးမှ လုပ်ကိုင်လေ့လည်း ရှိပါသတဲ့... ကိုယ့် စတိုင်လ်နဲ့ကို နေတတ်သူများဖြစ်သလို ကိုယ်ပိုင် အတွေးအခေါ်များကို ပိုင်ဆိုင်သူများလည်း ဖြစ်ပါတယ်... ဒီလို စရိုက်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူတွေ ဖြစ်တာမို့ အနုပညာလောကကို ခြေချမယ်ဆိုရင်လည်း အောင်မြင်နိုင်တဲ့သူများ ဖြစ်ပါတယ်တဲ့.... ဒါပေမယ့် ကိုယ်ရဲ့ အတွေးအမြင်ကသာ အမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ ယုံကြည်မှု ပြင်းထန်ချင်းက တခြားသူများရဲ့ ယုံကြည်မှုကို လစ်လျှူရှုသလို ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်... အပန်းဖြေတာတို့ ၀ါသနာကို အကောင်အထည် ဖော်တာတို့ကိုတော့ သိပ်မနှစ်သက်လှပါဘူး... အိုသွေးပိုင်ရှင်များက လက်တွေ့ကျကျ လုပ်ကိုင်ရတာကို နှစ်သက်ကြသူများလည်း ဖြစ်ပါတယ်... တခါတလေမှာတော့ Romantic ဆန်တာလေးတွေကိုလည်း ကြိုက်နှစ်သက်ကြပါတယ်တဲ့...
အိုသွေးပိုင်ရှင်များရဲ့ ထူးခြားချက်ကတော့ ကိုယ့်အတွက် အရေးကြီးတဲ့ အရာတွေအတွက် အများကြီး သည်းခံတတ်ပေမယ့် ရေရှည်တော့ သည်းမခံနိုင်ပါဘူးတဲ့... လူတွေနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့ အခါမှာ ယုံကြည်မှု ရှိရှိနဲ့ ဆက်ဆံတတ်ပြီး ကိုယ့်ထက် အားနည်းသူနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့ အခါမှာတော့ နွေးနွေးထွေးထွေး သဘောထား ကြီးကြီးနဲ့ ဆက်ဆံတတ် ကြပါသတဲ့... ပြိုင်ချင်တဲ့ စိတ်ဓာတ် ပြင်းထန်လို့ တခါတလေမှာ မလိုအပ်ဘဲ စိတ်ဆင်းရဲရတာမျိုးလည်း ရှိပါတယ်... အိုသွေးပိုင်ရှင်များက တခါတလေမှာ စကားနည်းပြီး အေးအေးဆေးဆေး တစ်ယောက်တည်း တွေးခေါ်နေရတာကို ကြိုက်နှစ်သက်ကြပါသတဲ့... တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ စိတ်ကသိကအောင့် ဖြစ်တဲ့ အခါတိုင်း စိတ်ထဲမှာ စုမထားဘဲ တဘက်သားကို ပြတ်ပြတ်သားသား ပြောတတ်ပါသတဲ့... ဒါပေမယ့် အားလုံး ပြီးသွားတဲ့ အခါမှာတော့ ဒါတွေ ငါ ဘယ်တုန်းက လုပ်ခဲ့လို့လဲ ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုး အားလုံးကို မေ့ပြီးနေနိုင်သူများပါ...
ကျန်နေသေးသော အေဘီသွေး အကြောင်းကိုလည်း ဆက်လက် တင်ပြသွားပါဦးမည်....
Filed under လူ့စရိုက်6ယောက်ပြောချင်ရာပြောသွားတယ်
ဒီနေ့တော့ ဘီသွေးပိုင်ရှင်များရဲ့ စိတ်နေသဘောထားများကို တင်ပြမှာ ဖြစ်ပါတယ်
ဘီသွေးပိုင်ရှင်များကတော့ အရမ်းငယ်စဉ်မှာတော့ သွက်လက်ဖျက်လတ်ပြီး တက်တက်ကြွကြွနဲ့ လှုပ်ရှုားတတ်ပေမယ့် ကျောင်းစတတ်တဲ့ အရွယ်လောက်ကစပြီး ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေနဲ့ လိုက်လျောညီထွေအောင် မနေတတ်ဘဲ လေလွင့်နေတတ်ပြန်ပါသတဲ့... ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိပြီ ဆိုရင်တော့ အားလုံးထက် ပိုပြီး ကြိုးကြိုးစားစားနေတတ်ကြတဲ့ သူများဖြစ်လို့ ရှုံးနိမ့်မှုကို မကြောက်ဘဲ မပြတ်သော ဇွဲလုံ့လနဲ့သာ ဆက်လက်ပြီး ကြိုးစားပါ... ကိုယ်သဘောကျတဲ့ အလုပ်တစ်ခုတည်းမှာဘဲ အာရုံအားလုံးကို နှစ်မြုပ်ထားတတ်တဲ့ စတိုင်လ် ဖြစ်ပါတယ်... ဒါပေမယ့် ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေက မပေးခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ သိပ်မကြိုးစားတတ်ကြပါဘူးတဲ့... ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ဘီသွေးပိုင်ရှင်များဟာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပုံစံအတိုင်း ဆက်ဆံရတာမျိုးကို မနှစ်သက်ကြပါဘူး... ကိုယ်နဲ့ သိပ် မခင်လှတဲ့ မိတ်ဆွေတွေနဲ့ အတူရှိတဲ့ အချိန်မှာတော့ ဟန်မပျက် အလိုက်တသင့် နေတတ်ကြသူများလည်း ဖြစ်ပါတယ်... မျက်နှာခွဲခြားတတ်ပြီးတော့ တခြားသူတွေရဲ့ ရှေ့မှာ လူတတ်လုပ်ရတာမျိုးကိုလည်း မနှစ်သက်တတ်ကြပါဘူး... ဘီသွေးပိုင်ရှင်များဟာ ပုံစံခွက်ထဲမှာ ချုပ်နှောင်ခံရတာမျိုးကို မုန်းပြီး လွတ်လွတ်လပ်လပ် သွားလာလှုပ်ရှားရတာကို နှစ်သက်ကြပါတယ်တဲ့... ဒါပေမယ့် သတိပြုစရာ တစ်ခုကတော့ လွတ်လပ်မှုကိုဘဲ အစဉ် တောင့်တနေခြင်းကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေကို ဒုက္ခပေးတတ်တယ်ဆိုတာကိုပါဘဲ...
ဘီသွေးပိုင်ရှင်များရဲ့ သူများနဲ့မတူ တမူထူးခြားနေတာကတော့ လွတ်လပ်စွာ တွေးခေါ်တတ်တဲ့အပြင် သူတပါးကို မှီခိုအားကိုနေရတာမျိုးကို မနှစ်သက်ကြပါဘူး... ကိုယ်အားကိုကိုးပြီး အလုပ်အားလုံးကို ဆောင်ရွက်ချင်ကြပါတယ်... အလုပ်တစ်ခုကို လုပ်နေစဉ်မှာတောင် တခြားအလုပ်တစ်ခုကို တပြိုင်တည်း ဆောင်ရွက်တတ်သူများလည်း ဖြစ်ပါတယ်... စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို သိပ် ဂရုမစိုက်တတ်လို့ ကိုယ့်ထက် အငယ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်မှုကို ခံရတတ်ပေမယ့် လူကြီးတွေဆီကတော့ ဆူပူကြိမ်းမောင်းတာကို ခံရတတ်ပါတယ်... တခါ ဒေါသထွက်ပြီဆိုရင်လည်း အဖြူအမည်း မခွဲခြားနိုင်လောက်အောင်ပါဘဲတဲ့... ဒေါသပြေတဲ့ အခါမှ အခြေအနေတွေကို ပြန်ရှင်းပြပြီး နားလည်မှုကို ယူတတ်ကြတဲ့ စတိုင်လ်မျိုးပါတဲ့... အမှားတစ်ခုကို လုပ်မိတယ် ဆိုရင်လည်း ကိုယ်လုပ်တဲ့ အမှားအတွက် တောင်းပန်ဘို့ ၀န်မလေးသူများလည်း ဖြစ်ပါတယ်... တနည်းအားဖြင့် အတွင်းစိတ်ထား ပွင့်လင်းသူများ ဖြစ်ကြလို့ အထင်အလွဲခံရတာတို့ ရန်ညှိးတို့ မရှိတဲ့ သွေးပိုင်ရှင်များ ဖြစ်ပါတယ်